ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ သြဂုတ်လ 27 2008 12:22 - မြန်မာစံတော်ချိန်
အခြားနိုင်ငံများနေ မြန်မာများ သူတို့နေထိုင်ခွင့် VISA အတွက် စိုးရိမ်ရသော်လည်း အမေရိကန် နိုင်ငံတွင် သိပ်မပူပင်ရပါ။ နည်းမျိုးစုံဖြင့် နေထိုင်ခွင့် ရနေဆဲပင် ဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန်များက မြန်မာ ၃ သောင်းခန့်ကို ဒုက္ခသည်စခန်းများမှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် လက်ခံပြီး ဆက်လက်ပြီး လက်ခံရန် အစီအစဉ် ရှိသည်ဟု သိရပါသည်။
လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်တွင် မြန်မာ အသိုင်းအ၀ိုင်း ကြီးမားလှသည်။ မြန်မာပြည်မှ အဆိုတော်၊ ဂီတပညာရှင်မှအစ စာပေ၊ အနုပညာရှင်၊ လုပ်ငန်းရှင် များစွာနှင့် မြန်မာများအတွက် အခမဲ့ လစဉ်ထုတ် သတင်းစာများပင် အမေရိကန် တ၀ှမ်းသို့ ပို့ပေးနေသည်ကို ၂၀၀၈ တွင် တွေ့ရသည်။ ထိုသတင်းစာများကို ဖတ်ကြည့်ပါက မြန်မာများ အမေရိကန်တွင် လှုပ်ရှားနေထိုင်ပုံ အကြမ်းဖျင်း သိနိုင်ပါသည်။
အမေရိကားသို့ မြန်မာများ မည်ကဲ့သို့ ရောက်ရှိလာသလဲ? အမေရိကန်မှ မစ်ရှင်ဆရာ ယုဒသန် (Judson) မြန်မာပြည်သို့ ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက် ၁၈၁၂ တွင် ရောက်ခဲ့သည်မှ စခဲ့ပုံရပါသည်။ အင်္ဂလိပ်များက သူတို့ အင်္ဂလိပ် Christian Mission များကို ရန်ကုန်၊ မန္တလေး မြို့ကြီးများတွင် နေထိုင်စေပြီး၊ အမေရိကန် Mission များမှာ အင်္ဂလိပ်မစ်ရှင်များ မသွားချင်သော တောင်တန်းဒေသ မိရိုးဖလာ နတ်ကိုးကွယ်သော တိုင်းရင်းသားများဆီ သွားရပါသည်။ ထိုသို့ မြန်မာပြည်ရောက် အမေရိကန်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ထူးချွန်သူမြန်မာများကို ပညာသင်များအဖြစ် အမေရိကန်သို့ စေလွှတ်ခဲ့ကြသည်ကို မြန်မာပညာသင်များ သမိုင်းသုတေသန စာအုပ်တွင် ဖတ်ရပါသည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ပညာတတ် မြန်မာများ အမေရိကန် တက္ကသိုလ်များကို ပိုမိုရွေးချယ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၆၂ ဦးနေ၀င်း၏ စစ်အစိုးရ တက်လာပြီးသည့်နောက်တွင် လုပ်ငန်းများကို ပြည်သူပိုင်သိမ်းရာမှာ အမေရိကန်သို့ အသင့်အတင့် ပြောင်းရွှေ့မှုများ ရှိလာပြီးသည့်နောက် ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းတွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ပြောင်းရွေ့လာကြပါသည်။ ၂၀၀၇ နောက်ပိုင်းတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စပ်မှ ဒုက္ခသည်စခန်းများမှ မြန်မာဒုက္ခသည် Refugee များ ကုလသမဂ္ဂ UNHCR Project အဖြစ် တတိယနိုင်ငံသို့ ပို့ဆောင်ပေးရာတွင် အမေရိကန်သည် အများစုကို လက်ခံနိုင်သောကြောင့် ယခုအခါ အမေရိကန်ရောက် မြန်မာများ ဦးရေမှာ သိန်းဂဏန်းကျော်သွားပြီဖြစ်သည်။
အမေရိကန် လူဦးရေ သန်း ၃၀၀ ခန့်တွင် တရားမ၀င် နေထိုင်သူ ခန့်မှန်းခြေ သန်း၂၀ နီးပါးရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အိမ်နီးချင်း မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှ ကူးလာသူများဖြစ်သည်။ သူတို့သည် စပိန် ဘာသာစကားကို ပြောပြီး သူတို့ Native Language လည်း ရှိပါသည်။ မြန်မာများက သူတို့ကို "ပဲ" ဟု ခေါ်ကြသည်။ ဘာကြောင့်ရယ်မသိ၊ ပဲ စားပြီး အားကောင်းမောင်းသန်သည့် သဘော အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
အများအားဖြင့် မက္ကဆီကို တောင်ပေါ်သားများမှာ အလုပ် အင်မတန် လုပ်နိုင်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ စင်ကာပူသို့ အလုပ်လာလုပ်သော အိန္ဒိယနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ အလုပ်သမား လူတန်းစားများကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်း ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်သားများထက်ပင်လျင် အပင်ပန်းခံနိုင်၊ အလုပ်လုပ်နိုင်သူများဖြစ်ပြီး အာရှမှ တရုတ်၊ ကိုးရီးယား၊ ဗီယက်နမ်၊ မြန်မာများ သူတို့ကို ယှဉ်၍ အလုပ်ကြမ်း မလုပ်နိုင်ပါ။
စားသောက်ဆိုင်၊ မြို့ကြီး၊ ကုန်တိုက်၊ အမှိုက်ကြုံး၊ သန့်ရှင်းရေး စသည့် အလုပ်သမား လောကတွင် မက္ကဆီကန်များက ကြီးစိုးထားပါသည်။ နယ်ဘက် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ခြံခင်း၊ သတ္တု ရေနံလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး စသည့် အလုပ်ကြမ်းလောကတွင်လည်း ထိုသူများပင် အားကိုးရပါသည်။
၂၀၀၈ တရားဝင်စာရင်းကို မသိနိုင်သေးသော်လည်း အမေရိကန် လူဦးရေစာရင်း တရားဝင် ကျေညာချက်အရ http://factfinder.census.gov ၂၀၀၆ တွင် တနိုင်ငံလုံး လူဦးရေ ၂၉၃ သန်းရှိပြီး စပိန်စကားပြော လူဖြူ ၃၅ သန်း အပါအ၀င် လူဖြူ ၂၂၁ သန်း၊ လူမဲ ၃၆ သန်း၊ Red Indian (Native American) ၅ သန်း၊ အာရှတိုက်သား ၁၂ သန်းနဲ့ အခြားလူမျိုး ၁၈ သန်း ရှိသည်ဟု ရေးထားသည်။ အာရှတိုက်သားများတွင် စာရင်းအရ အများဆုံး လူမျိုးများမှာ တရုတ် ၂.၄ သန်း၊ အိန္ဒိယ ၁.၇ သန်း၊ ဖိလစ်ပိုင် ၁.၉ သန်း၊ ဗီယက်နမ် ၁.၁၂ သန်း၊ ကိုရီးယား ၁.၀၇ သန်း၊ ဂျပန် ၀.၈ သန်း ဖြစ်ကြပြီး လူတသိန်းခန့်ရှိသည့် လူမျိုးများမှာ သီရိလင်္ကာ၊ တိုင်ဝမ်၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လော၊ ပါကစ္စတန်၊ Hmong လူမျိုး၊ ထိုင်း၊ မလေးရှားများ ဖြစ်သည်။
မြန်မာလူမျိုးရေ တသိန်း မရှိသေးသော်လည်း ယခု ၂၀၀၇ နောက်ပိုင်း အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဒုက္ခသည်များကို လက်ခံနေသောကြောင့် မြန်မာလူဦးရေသည် အမေရိကန်တွင် သေချာပေါက် များလာနေပြီဖြစ်သည်။ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ လူဦးရေ များခြင်းမှာ သဘာဝကျသည်။ ဖိလစ်ပင်းက တတိယအများဆုံး ဖြစ်ရခြင်းမှာ အမေရိကန် ကိုလိုနီအဖြစ် ၁၉၄၆ အထိ နေရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကိုရီးယားစစ်ပြီး ၁၉၅၃ နှင့် ဗီယက်နမ်စစ်ပြီး ၁၉၇၅ တွင် ဒုက္ခသယ်များစွာ အမေရိကန်က လက်ခံခဲ့သောကြောင့် ထိုလူမျိုး ၂ ခုမှာ နံပါတ် ၄ နှင့် ၅ အများဆုံး အာရှတိုက်သားများ ဖြစ်နေရသည်။ ယခု မြန်မာဒုက္ခသည်များကို လက်ခံခြင်းဖြင့် မြန်မာများ ၂၀၀၈ နောက်ပိုင်း အမေရိကန်တွင် နံပါတ် ၆ အများဆုံး အာရှတိုက်သားများဖြစ်ရန် အခွင့်အလမ်းများနေပြီဟု ဆိုနိုင်ပေသည်။ မြန်မာများ ပြည်ပထွက် အလုပ်လုပ်ရခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး စစ်အစိုးရကို အပြစ်ပုံချရမည်ဖြစ်သည်။
၁၉၈၈-၂၀၀၇ မြန်မာများ အမေရိကန်သို့ ရောက်လာသော နည်းလမ်းများတွင့့့့့့်
၁။ Green Card / Citizen ရသူများမှ သူတို့ ဆွေမျိုးများကို တရားဝင်ခေါ်ယူခြင်း၊
၂။ အမေရိကန်သို့ ကျောင်းလာတက် Student Pass နှင့်လာရောက်ပြီး ဆက်လက် နေထိုင်ခွင့် နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရရှိသွားခြင်း၊
၃။ အလုပ်ကိုင်နှင့် အလည်အပတ်အဖြစ် H1, B1, B2 ဗီဇာများဖြင့် လာရောက်ပြီး ဆက်လက် နေထိုင်ခွင့် နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရရှိသွားခြင်း၊
၄။ နယ်စပ်ဒေသများမှ ဒုက္ခသည်အဖြစ် ကုလသမဂ္ဂ အစီအစဉ်ဖြင့် ရောက်ရှိလာခြင်း၊
၅။ အခြားနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရောက်ရှိခြင်း (ဥပမာ၊ DV မဲပေါက်ခြင်း၊ ဂူအမ်ကျွန်းမှတဆင့်လာခြင်း၊ ဂျမေကာ၊ မက္ကဆီကို၊ ဟွန်ဒူရပ် စသည့် နိုင်ငံများသို့ လာပြီး မက္ကဆီကိုနယ်စပ်မှ တရားမ၀င်လာသူများ လမ်းကြောင်းအတိုင်း ခိုးဝင်လာခြင်း . . စသည့် နည်းလမ်များစွာ ရှိပါသည်။)
အမေရိကန်အစိုးရက မျက်စိမှိတ်ပြီး မြန်မာများကို လက်ခံနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ Migrant, Work H1, DV, Student စသည့် ဗီဇာများအတွက် အမေရိကန်အ၀င်မှာ ဘာမှ စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ Visit VISA များအတွက် ၀င်ခွင့်မရဘဲ အမေရိကန်မြို့ လေဆိပ်များမှ Depot လုပ်ခံရသူ အလွန်နည်းပါးသော်လည်း အဆင်မပြေသူများ အနည်းအကျဉ်း ရှိနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ဗီဇာ လျှောက်ရာတွင် အမေရိကန်တွင်ပဲ ထာဝရ နေထိုင်ချင်လှသည့် ပုံစံနှင့်မလျှောက်ဘဲ အလည် ၆ လခန့်သာ နေချင်သည့်ပုံစံနှင့် အင်တာဗျူးဝင်လျှင် ဗီဇာရနိုင်သော်လည်း မြန်မာများအတွက် အမေရိကန်ဗီဇာမှာ ခက်ခဲနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ဗီဇာရရှိပြီးနောက် အမေရိကန်ပြည်သို့ ၀င်ခွင့်ရလျှင် ၆ လ နေထိုင်ခွင့် တုံးထုပေးလိုက်ပြီး ထို ၆ လအတွင်းမှာ အခြားနည်းဖြင့် ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့် ရရှိအောင် ကြိုးစားရသည်။
အမေရိကန်တွင် အလည်ရောက်လာသော မြန်မာများအတွက် အခြေကျရန် ၅ နှစ် အနည်းဆုံး လိုအပ်သည်ဟု အခြေကျနေသူ မြန်မာများက ပြောဆိုကြသည်။ သို့ရာတွင် အမေရိကန် ဂရင်းကဒ် ၂ နှစ်အတွင်း ရရှိရေးအတွက် နည်းလမ်းများမှာ H1 Visa အလုပ်အကိုင် ရရှိရေးနှင့် ခိုလှုံခွင့်ဟု ခေါ်နေသော Asylum လျှောက်ထားရေးပင် ဖြစ်သည်။ Student Pass, Business Pass ဆက်လျှောက်ထား၊ နေထိုင်သွားလျှင်လည်း ရနိုင်ပါသည်။
အထူးသဖြင့် မြန်မာများအကြားတွင် ရေပန်းစားနေသော အမေရိကန်တွင် ခိုလှုံခွင့်ဗီဇာကို ၂၀၀၇ နောက်ပိုင်းတွင် ပိုမိုအားကိုးလာကြသည်။ မြန်မာအများစုမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရကို လုံးဝမကြိုက်သော်လည်း စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး၊ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင် တက်ကြွစွာ မပါဝင်သောကြောင့် အမေရိကန်ရောက်လာပြီး ခိုလှုံခွင့် မလျှောက်လိုကြပါ။ ကျောင်းတက်၊ ဘွဲ့ရ၊ အလုပ်ရ၊ H1 Visa ရရှိပြီးနောက်ပိုင်း အိန္ဒိယကျောင်းသားများကဲ့သို့ ၅ နှစ်၊ ၁၀ နှစ် ကြိုးစားလျှင် အမေရိကန်တွင် ကြီးပွားအဆင်ပြေနိုင်ပေသည်။ သို့သော် ယခုခေတ်မှာ စစ်အစိုးရဖိနှိပ်မှုကို အမေရိကန်အစိုးက အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်၊ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့နေချိန်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် မြန်မာများ ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံရာတွင် ရှေ့နေများနှင့် စနစ်တကျ ဇာတ်လမ်းသေချာ ရေးသားတောင်းဆိုမှုများကို အင်တာဗျူးဝင်ပြီး ကျေနပ်ပါက ခိုလှုံခွင့်ပေးလေ့ရှိပါသည်။ ဒုတိယနိုင်ငံ နော်ဝေး၊ ဒိန်းမတ်၊ အင်္ဂလန်၊တိုင်ဝမ်၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်း၊ မလေးရှား စသည့် နိုင်ငံများတွင် နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် (ဥပမာ၊ အလုပ်ဗီဇာ၊ Permanent Resident ဗီဇာ ကိုင်ထားသူ) များကို အမေရိကန် ခိုလှုံခွင့်ပေးရန်အတွက် ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ အများစုမှာ ခိုလှုံခွင့် နေထိုင်အလုပ်လုပ်ခွင့်များ ရရှိပြီး အဆင်ပြေသွားကာ အချို့မှာ ၅ နှစ်ကျော်ပါက အမေရိကန် နိုင်ငံသားအဖြစ် လျှောက်ထားခွင့်ပင် ရရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ခိုလှုံနေထိုင်ခွင့်ကို လာဘ်မြင်သူ မြန်မာများက ကောင်းကောင်း အသုံးချနေကြပါသည်။
နိုင်ငံရေးတွင် အမေရိကန်ကို အားကိုးချင်သော်လည်း လက်တွေ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေ လေ့လာသူများက အမေရိကန်၏ အာဖဂန်နစ္စတန်အပြီး၊ အီရတ်တွင် ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုကြောင့် နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်း တွေ့နေပြီး၊ မြန်မာ့အရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် ဆွေးနွေးနိုင်သော်လည်း တရုတ်၊ ရုရှား တို့ကြောင့် ရပ်တန့်နေရပါသည်။
စီးပွားရေးအခြေအနေတွင်လည်း စစ်စရိတ်ထောင်းသော အမေရိကန်မှ တရုတ်ပြည်သို့ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊ ကွန်ပြူတာစက်ရုံများစွာ ပြောင်းရွှေ့သွားမှုများရှိနေ၍ အလုပ်အကိုင်များ လျော့နည်းလာနေသည်ဟု ဆိုသည်။ အချို့က Recession စီးပွားကပ် ဆိုက်နေပြီဟု မှတ်ချက်ချသည်။
လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်ကျော်က စင်ကာပူနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် US$ 1 dollar = Singapore $1.8 ခန့် မှာ ယခုနှစ်တွင် စင်ကာပူဒေါ်လာ 1.3 ဈေးနှုန်းသို့ တဖြေးဖြေး ကျဆင်းသွားပြီး အမေရိကန် ဓာတ်ဆီဈေးမှာ ၂ ဒေါ်လာမှ ယခု ၄ ဒေါ်လာသို့ တက်သွားသည်။ လူတဦးချင်း ၀င်ငွေမှာ ပျှမ်းမျှ တနှစ် ၃ သောင်းခန့် ဆိုသော်လည်း တလ ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ ရနိုင်သော အမြဲတမ်းအလုပ်မှာ အလွန်ရှားပါးနေပါသည်။ ယခင်က အမြဲတမ်း အလုပ်သမားများကို ဖြုတ်ပြီး ကန်ထရိုက် အလုပ်သမားများအဖြစ် ပြောင်းလဲခန့်ခြင်း၊ လစာများများ ရသူများကို အလုပ်အနားယူ Retrench လုပ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) အလုပ် ၂ ခု လုပ်စေခြင်း စသဖြင့် ကပ်ဆိုက်နေချိန်ဖြစ်သည်။
Social Security ဖြင့် ထုတ်စားနေသော စနစ်မှာ ရေရှည်တွင် မဟန်တော့ကြောင်း သိလာသဖြင့် ယခုအခါ 401 Plan ဆိုသော စနစ်သစ်ကို စတင်ကျင့်လာရသည်။ နိုင်ငံသား အသက်ကြီးလာလျှင် ငယ်စဉ်ကာလ အလုပ်လုပ်ရာ၌ အလုပ်ရှင်နှင့် အချိုးကျငွေ စုဆောင်းထားသည့် စနစ်ဖြစ်သည်။ စင်ကာပူတွင် ၁၉၇၀ နောက်ပိုင်း စတင်ကျင့်သုံးသော CPF စနစ်ဖြစ်သည်။ မလေးရှားကလည်း EPF အဖြစ် ကျင့်သုံးပြီး သြစတြေးလျား၊ အင်္ဂလန်တို့ကလည်း ကျင့်သုံးနေပြီဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ရောက် မြန်မာများအတွက် မည်သို့ဖြစ်စေ အခွင့်အလမ်းများစွာ ရှိပါသည်။ စီးပွားရေး ကပ်ဆိုက်သော်လည်း ကြိုးစားပြီး ဥာဏ်ပညာ၊ ၀ိရိယ အားစိုက်ပြီး အမေရိကန်စနစ်ကို သေချာလေ့လာ လုပ်ကိုင်ပါက ကိုရီးယား၊ ဗီယက်နမ်များထက် မသာလျှင်ပင် တန်းတူလိုက်လာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ယခင်က လစာ၊ ၀င်ငွေ ကောင်းလှသော ဆရာဝန် အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အသိုင်းအ၀ိုင်းများသည် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားသူများနှင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဝေးနေရသည်။ အားလုံးက မြန်မာပြည်ကြီး ပြည်တော်သာအဖြစ်၎င်း၊ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ်၎င်း မြင်ချင်သော်လည်း တဦးနှင့်တဦး ပူပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိပါ။
၂၀၀၇ သံဃာတော်လှုပ်ရှားမှု ပြီးသည့်နောက်တွင် အမေရိကန်ရောက် မြန်မာများသာမက ပြည်ပရောက် မြန်မာများ ပြည်တွင်းသို့ ထောက်ပံ့ငွေများကို ပူးပေါင်းကောက်ခံပေးခြင်းများ ရှိလာသည်။ ၂၀၀၈ မတ်လ မြန်မာ့သမိုင်းတွင် မကြုံဖူးသော နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းကြောင့် ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်သားများ သိန်းနှင့်ချီ သေဆုံးပြီး ၂ သန်းခန့် အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်သွားရာတွင် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ဥပက္ခာပြုလုပ်ရပ်ကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများက အံ့သြစုတ်သပ် ဖြစ်ရသည်။ ပြည်ပရောက် မြန်မာများ ဆက်လက် ပူးပေါင်းရံပုံငွေရှာ ထောက်ပံ့လုပ်ဆောင်ရသည်။ အမေရိကန် တ၀ှမ်းလုံးတွင် မြန်မာများ Fund Raising Events များ၊ ဆုတောင်းပွဲများနှင့် အချို့ အမေရိကန်မြန်မာများ ခွင့် လနှင့်ချီပြီး မြန်မာပြည်တွင်း ပြန်သွား ကူညီလုပ်ကိုင်ကြသည်။
အမေရိကန်ရောက် မြန်မာများ အထူးသဖြင့် အခြေမကျစဉ် (၅ နှစ်အတွင်း) အထူးခက်ခဲမှုများကို တွေ့ကြုံနေစဉ်တွင် အဓိကဖြစ်သော ပညာရေးအတွက် အချိန်ပေးနေသော မြန်မာလူငယ်များစွာ ရှိသည်မှာ အားရဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ လူကြီးများလည်း စင်ကာပူကဲ့သို Self Upgrading Course များကို တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ Community Center များတွင် တက်နေကြသည်။ ရောက်ခါစတွင် မြန်မာများ ပညာရေး မလုပ်နိုင်သေးဘဲ ၀မ်းရေးအတွက် အလုပ်ဝင်လုပ်ရင်း လုံးပါးသွားပြီး ငွေကြေးကျွန် မဖြစ်ချင်ဘဲ ဖြစ်သွားရသူများလည်း ရှိပါသည်။ စင်ကာပူ၊ မလေးရှား၊ တရုတ်ပြည်များတွင် စီးပွားရေး ကောင်းနေဆဲတွင် တော်ရုံစိတ်ထားနှင့် အမေရိကား လာရောက် စီးပွားရှာလိုသူ ရှိမည် မဟုတ်ပေ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အဆင်ပြေအောင် နေတတ်သူမှာ ဘယ်ရောက်ရောက် အဆင်ပြေမည်ဖြစ်သည်။ ငွေကြေးနောက်လိုက်သော လူများအဖို့ တရုတ်စကားပုံအရ ခြေ ၄ ချောင်းရှိသော ပိုက်ဆံသတ္တ၀ါ လက်အောက်သို့ ကျရောက်သွားလေ့ ရှိပါသည်။ ဘ၀အတွက် အဓိကလိုအပ်သော ပညာရေး၊ ပြည်သူ့နီတိ တရားများကို လက်ခံ ကျင့်သုံးသူများအဖို့ မည်သည့်နိုင်ငံရောက်ပါစေ စိတ်ချမ်းသာမည်။
ကံ၊ ဥာဏ်၊ ၀ိရိယ ၃ ပါးနှင့် ကိုက်ညီပါက ပညာ၊ ငွေကြေးဥစ္စာလည်း တိုးပွားလာမည်။ တိုးပွားနေသော အမေရိကန်ရောက် အောင်မြင်နေသော မြန်မာများကိုလည်း အားကျမိပါသည်။ နောင်တချိန်တွင် မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ထူထောင်ရေးတွင် ကမ္ဘာတွင် အကြီးကျယ်ဆုံး၊ အချမ်းသာဆုံး၊ ဒီမိုကရေစီအရှိဆုံး ဖြစ်သော အမေရိကန်ရောက်မြန်မာများ အဓိကအခန်းမှ ပါဝင်နိုင်စေရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/31/20080အကြံပြုခြင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အစာလက်မခံတာ ၂ ပတ်ခန့်ရှိပြီ
သောကြာနေ့၊ သြဂုတ်လ 29 2008 19:19 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ ထိန်းသိမ်းခံ အတိုက်အခံ ပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစားအသောက်များကို ယနေ့ထိ လက်မခံသေးကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပြင်ပမှ အစားအစာများကို လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တ ၂ ပတ်ခန့်ကတည်းက ငြင်းပယ်နေသည် ဆိုသော သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေပြီး ယနေ့ထိ အကြောင်းရင်း တစုံတရာ အတိအကျ မသိရသေး ဖြစ်နေသည်။
"အစားအသောက် လက်မခံဘူး ဆိုတာကိုပဲ သိရသေးတယ်။ အခြေအနေ အပြောင်းအလဲ မရှိသေးဘူး။ ကျနော်တို့လည်း သတင်းတွေ ရအောင် ကြိုးစားနေတုန်းပဲ။ သူ့အခြေအနေ၊ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာတွေကို ခုထိ ဘာမှ အတိကျ မသိရသေးဘူး" ဟု အန်အယ်လ်ဒီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
စစ်အစိုးရသည် ထိုသတင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မဟုတ်မှန်ကြောင်းကို ငြင်းဆိုထားသည်။ ထိုသတင်းမှာ ကောလာဟလသာ ဖြစ်သည်။ မဟုတ်မှန်ပါ။ သူ့ထံမှ နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်သော တောင်းခံမှု တစုံတရာ မရှိပါဟု အမည်မဖော်လိုသူ အရာရှိတဦးက ပြောကြောင်း အေအက်ဖ်ပီ သတင်းတရပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစားအသောက်များ လက်မခံသည့် သတင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အတိုက်အခံများက အမျိုးမျိုး ထင်ကြေးများ ပေးနေကြသည်။
"အန်အယ်လ်ဒီ အဖွဲ့ဝင်တွေ ကိုယ်တိုင်က သူနဲ့ အဆက်သွယ် မရဖြစ်နေကြတော့ အတိအကျ ပြောဖို့ ခက်နေတယ်။ ဒါဟာ သူ(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်)က သူ ရသင့်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးနေတဲ့အပေါ်မှာ တောင်းဆိုဖို့များ လုပ်နေသလားလို့ စဉ်းစားစရာဖြစ်နေတယ်" ဟု ပြည်သူ့လွတ်တော် ကိုယ်စားပြု ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးအေးသာအောင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အန်အယ်လ်ဒီ (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) မှ နိုင်ငံခြားရေး တာဝန်ခံ ဦးညိုအုန်းမြင့်ကလည်း "အဓိက သူတောင်းဆိုတာ ကတော့ နိုင်ငံရေး အချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ရှေ့နေနဲ့ တွေ့မယ်ဆိုတာတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
ဤအတောအတွင်း အတိုက်အခံများကြားတွင်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ နေအိမ်တွင် အင်တာနက် တပ်ဆင်ခွင့်ပေးရန်၊ သူ၏ရှေ့နေနှင့် တွေ့ခွင့်ပေးရန်၊ သူ၏ မိသားစုဆရာဝန်နှင့် တွေ့ခွင့်ပေးရန်တို့ကို တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေခဲ့သည်။
ထိုတောင်းဆိုချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဦးဥာဏ်ဝင်းက "ရှေ့နေနဲ့ တွေ့ခွင့်တောင်းတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တွေ့ခွင့် ရ၊ မရ ကတော့ အခုထိ မသိရသေးဘူး" ဟု ပြောသည်။
ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ရုံးမှလည်း စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ရှိနေသည်။
"ကျနော်တို့မှာ သူ အစားအသောက်တွေ လက်မခံဘူးဆိုတာ ကြားနေရတယ်။ ပြဿနာက ဒါကို အတည်ပြုဖို့က တော်တော် ခက်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ သူ့ရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေကို တကယ် စိုးရိမ်နေပါတယ်" ဟု အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးရုံး လက်ထောက် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ရောဘတ်ဝုဒ်က သြဂုတ် ၂၈ ရက်နေ့က ပြုလုပ်သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ သြဇာတိက္ကိမကြီးသူ အမျိုးသမီးများ စာရင်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဆင့် ၃၈ ချိတ်
သောကြာနေ့၊ သြဂုတ်လ 29 2008 17:41 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ Forbes မဂ္ဂဇင်းကြီးက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကမ္ဘာပေါ်တွင် သြဇာ တိက္ကိမ ကြီးမားသူ အမျိုးသမီးများ စာရင်း၌ အဆင့် ၃၈ အဖြစ်သတ်မှတ် ဖေါ်ပြလိုက်ပါသည်။
နှစ်စဉ် ထုတ်ပြန်လေ့ရှိသော ဤစာရင်းသည် မီဒီယာများက ဖေါ်ပြမှု၊ ဘဏ္ဍာရေး အင်အားနှင့် အလုပ်အကိုင် ရာထူး စသည်တို့ကိုမူ တည်တွက်ချက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး နိုဘယ်လ်ဆုရ မြန်မာခေါင်းဆောင်သည် သြဇာတိက္ကိမ ကြီးမားသော အမျိုးသမီး နိုင်ငံရေးသမားများ စာရင်းတွင် အဆင့် ၁၂ ချိတ်သည်။
ဤစာရင်းနှင့်အတူ တွဲ၍ပါသော ဆောင်းပါးတွင် နာမည်ကြီး အမျိုးသမီးများကို မိမိတို့၏ ထိပ်ဆုံးအဆင့် အမျိုးသမီး ၃ ဦးကို ရွေးချယ်ပေးပါရန် မေးမြန်းခဲ့ရာ Vogue မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာ ဂျုံးဂျူလီယက်ဘတ်ခ် (Joan Juliet Buck) က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို “အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရတဲ့ သက်ရှိ အာဇာနည် အမျိုးသမီးဖြစ်၍” ဟု ဆိုကာ အဆင့် ၁ အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ဤရွေးချယ် သတ်မှတ်မှုနှင့်အတူ ပူးတွဲပါရှိခဲ့သည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အထ္ထုပ္ပတ္တိအကျဉ်းတွင် ရိုးတိုးရိပ်တိတ် ဖေါ်ပြထားချက်အရ ဤအဆင့် ရရှိခဲ့ခြင်းသည် လွန်ခဲ့သော လများအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကို မီဒီယာများက အာရုံစိုက် ဖေါ်ပြခဲ့ကြခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် နာဂစ်ဆိုင်ကလုံး မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်အပြီး မီဒီယာများတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အကြောင်းများများ ပါလာခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ သူမ၏ အဆင့်အတန်းသည် မဂ္ဂဇင်း၏ အဓိက အရေးထားရာဖြစ်သော အလုပ်အကိုင် ရာထူး အဆင့်အတန်းနှင့်လည်း သက်ဆိုင် ရောင်ပြန်ဟပ်မှု ရှိနေသည်။ သူမကို တိုက်ပွဲဝင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်အဖြစ်၎င်း၊ “ရာထူးမှ ဖြုတ်ချခံရသော ဝန်ကြီးချုပ်” အဖြစ်၎င်း ဖေါ်ပြထားခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ အထက်လွှတ်တော် အမတ်လည်းဖြစ်၊ သမတလောင်းအဖြစ် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်သော မစ္စ ဟီလာရီ ရော့ဒမ် ကလင်တန် သည် “မီဒီယာ” အမှတ်အများဆုံး ရခဲ့ပြီး အဆင့် ၂၈ ဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အထက်မှ ကပ်လျက် နေရာ ရသွားသည်။
လက်ရှိ သမတကတော်နှင့် ထိန်းသိမ်းခံ နိုဘယ်ဆုရှင်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲ ခိုင်ခိုင်မာမာ ထောက်ခံသူတဦးဖြစ်သူ လော်ရာဘုရှ် မှာမူ Forbes မဂ္ဂဇင်း၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင် အဆင့် ၄၄ အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသည်။
ဤအဆင့် သတ်မှတ်ချက်များ ထွက်ပေါ်လာချိန်သည် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနက မြန်မာစစ်အစိုးရကို ကုလ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဥက္ကဌ၏ ကြေငြာချက်တွင် ဖေါ်ပြပါရှိသော အစိုးရ၊ အခြား အတိုက်အခံ အင်အားစုများနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ အကြား အချိန် သတ်မှတ်ချက်ရှိသည့် ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ရန် နှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အားလုံးကို လွှတ်ပေးရန် စသည့် တောင်းဆိုချက်များကို လေးစားလိုက်နာရန် ပန်ကြားချက်နှင့် မရှေးမနှောင်း ပေါ်ထွက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
“ကုလအထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ အီဗရာဟင် ဂမ်ဘာရီ ၏ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် တိုးတက်မှုများကို မြှင့်တင်ရန် ကြိုးပန်းမှုများကို မြန်မာအစိုးရက ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ခြင်းအတွက် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသည် နောက်တဖန် အလွန်အမင်း စိတ်ပျက်မိကြောင်း” ဟူ၍ နိုင်ငံခြားရေးဌာန လက်ထောက် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ရောဘတ်ဝုဒ် (Robert Wood) က ယမန်နေ့က ကြေငြာချက်ကို ဖတ်ကြား၍ ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။ မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီသည် ယခင်အပတ်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၆ ရက်ကြာ လာရောက် လည်ပတ်ခဲ့သည်။
“မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းအကြား ဆက်ဆံရေး တိုးတက်မှုသည် မြန်မာအစိုးရက ဤလမ်းကြောင်းအတိုင်း ခိုင်ခိုင်မာမာ ရိုးရိုးသားသား လိုက်ပါ လျှောက်လှမ်းနိုင်မှုအပေါ်တွင် မူတည်နေသည်” ဟု နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေးနှင့် ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်စဉ်တွင် အားလုံး ပါဝင်နိုင်ရေး လိုအပ်ချက်ကို ရည်ညွှန်းကာ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။
၂ဝဝ၆ ခုနှစ်နှင့် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်များကမူ Forbes မဂ္ဂဇင်းသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အဆင့် ၄၇ နှင့် ၇၁ အဖြစ် အသီးသီး သတ်မှတ် ဖေါ်ပြထားခဲ့သည်။
ဂျာမဏီနိုင်ငံ အဓိပတိ အင်ဂျလာမာကယ်လ် (Angela Merkel) မှာ ယခုတကြိမ်တွင်လည်း သုံးနှစ်ဆက်တိုက် အဖြစ် အမြင့်ဆုံးအဆင့် အဆင့် ၁ အဖြစ် သတ်မှတ် ဖေါ်ပြခံခဲ့ရပါသည်။
ရဲရင့်ထက်မြက်တဲ့ သူမရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်
သောကြာနေ့၊ သြဂုတ်လ 29 2008 14:32 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အထူးသံတမန်ကြီး မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီကတော့ သူ့ရဲ့ တရက်တိုး ၆ ရက်တာခရီးစဉ်ကို သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့က အဆုံးသတ် ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြန်ပါပြီ။ ဒီတကြိမ်မှာတော့ သံတမန်ကြီးခမျာ မြန်မာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများရဲ့ မင်းနေပြည်တော်ကိုတောင် ဖိတ်ကြားတာ မခံခဲ့ရရှာပါဘူး။ တကယ့် အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆိုသူရဲ့ အနားကိုတောင် သီခွင့် မရခဲ့တာပါ။ ရုပ်သေးဝန်ကြီးတချို့၊ အကြီးအကဲ တချို့နဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ ကျောရိုးပါတီ တချို့က တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်လေးတချို့နဲ့ ခဏ တွေ့ခွင့်ရသလို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မီတီဝင် တချို့နဲ့ တွေ့ဆုံခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ့် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တော့ တွေ့ဆုံခွင့် မရခဲ့ရှာပါဘူး။ ထူးခြားတာကတော့ စစ်အစိုးရက တွေ့ဆုံခွင့်မပေးလို့ တွေ့ဆုံခွင့် မရခဲ့တာမဟုတ်ဘဲ သံတမန်ကြီးက တွေ့ဆုံဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါရဲ့နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်က သူ့ကိုတွေ့ဆုံဖို့ ငြင်းပယ်လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းအရတော့ သံတမန်ကြီးက မပြန်ခင်မှာ တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့ ထပ်ပြီး ကြိုးစားခဲ့သေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကိုလည်း လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ငြင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ စိတ်မကောင်း ဖြစ်စရာပါပဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့လည်း အဲဒီလို လုပ်လိုက်ရတာကို စိတ်ကောင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလို လုပ်သင့်တယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ မှန်ကန် သင့်မြတ်လှပါတယ်။ သံတမန် တချို့ကတော့ အာရှ မဆန်ဘူး၊ သံခင်းတမန်ခင်းအရ မဖြစ်သင့်ဘူး ဘာညာ ဝေဖန်ပြောဆိုကြပေမယ့် မှန်ကန် ရဲရင့်ထက်မြက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်လို့ ဒီမိုကရေစီ ချစ်မြတ်နိုးကြသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ပြည်သူအများစုကလည်း နှစ်ထောင်းအားရ ထောက်ခံကြမယ် ဆိုတာလည်း အသေအချာပါပဲ။ အခုတခေါက်ဟာ သံတမန်ကြီးရဲ့ စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးနောက်ပိုင်း စတုတ္ထမြောက်ခရီးစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ခရီးစဉ်တချို့မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်း တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ စစ်အစိုးရက နိုင်ငံတကာကို လှည့်စားဖို့သက်သက် ခန့်ထားခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးဆိုသူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ကြည်နဲ့လည်း တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လောက်လောက်လားလားရှိတဲ့ ရလဒ် ဘာတခုမှ ထွက်ပေါ်မလာခဲ့ပါဘူး။ အနိမ့်ဆုံး လွှတ်သင့်လွှတ်ထိုက်နေပြီ ဖြစ်တဲ့၊ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်နေပြီ ဖြစ်တဲ့၊ ကျန်းမာရေး မကောင်းတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားကြီးတွေကိုတောင် လွတ်မြောက်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်စွမ်း မရှိပါဘူး။ ရှင်းလင်းပေါ်လွင်နေတဲ့ အချက်ကတော့ စစ်အစိုးရဟာ ကုလ သံတမန်ကြီးကို စတင်တွေ့ဆုံခဲ့ကတည်းက ရည်ရွယ်ချက် မမှန်ကန်ဘူး ဆိုတာပါပဲ။
ကမ္ဘာကို သံတမန်ရေး ကစားကွက်နဲ့ လှည့်စားဖို့ကိုပဲ ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။ သံတမန်ကြီးခမျာလည်း မြန်မာအာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်တွေ ကြိုးဆွဲတဲ့အတိုင်း လိုက်ကရ၊ ခေါင်းညိမ့်ရ၊ အလိုက်သင့် ပြောဆိုဆက်ဆံရနဲ့ ဘာမှထူးခြားတဲ့ ရလဒ် ထွက်ပေါ်မလာခဲ့တော့ နိုင်ငံတကာ အလယ်မှာ မျက်နှာပျက်၊ သိက္ခာကျရတာပဲ အဖတ်တင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။
လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့် လေ့လာရေး အဖွဲ့ကြီးရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အကြံပေးအရာရှိ David Scott Mathieson ကတော့ "မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ မစ္စတာဂမ်ဘာရီရဲ့ ခရီးစဉ်ကို သူတို့ အကျိုးစီးပွားအတွက် သူတို့လုပ်နေတာတွေကို ပြဖို့သက်သက် အသုံးချလိုက်တာပါပဲ။"
"မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက် လည်ပတ်ခွင့် ရခဲ့တဲ့ သံတမန်တိုင်းဟာ ဒီလိုပါပဲ၊ သူတို့ဟာ စစ်အစိုးရက သူတို့ကို ကြည့်စေချင် တွေ့စေချင်တာတွေကို သွားကြည့်၊ သွားတွေ့ကြမယ်။ အဲဒီတော့ စစ်အစိုးရ လုပ်ကြံဖန်တီး ထားတာတွေကိုပဲ သူတို့ မြင်ရမှာပေါ့" လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် အဓိက ဦးဆောင်နေတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ကလည်း အကျယ်ချုပ် ဖမ်းဆီးနေရတဲ့ ကာလက များနေတော့ နိုင်ငံရေးအရ လှုပ်ရှားဦးဆောင်မှုပေးဖို့ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း ကုလ သံတမန်ကြီးကများ ထိထိရောက်ရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးမှာ ကူညီပေးနိုင်မလားဆိုပြီး တွေ့ဆုံခဲ့၊ ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ တဖက်က အာဏာရယူထားတဲ့ စစ်အစိုးရကိုယ်နှိုက်ရဲ့ စေတနာနဲ့ ရည်ရွယ်ဦးတည်ချက်က မမှန်ကန်လေတော့ သံတမန်ကြီးအနေနဲ့လည်း ဒီထက် ဘာမှ ပိုပြီး မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ အနေနဲ့ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အစိုးရကို မလိုက်နာမနေရ (binding) အရေးယူဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မချမှတ်နိုင်ဘဲ ထိထိရောက်ရောက် ဖိအားပေးအရေးယူမှု လက်တွေ့မရှိတဲ့အတွက် စစ်အစိုးရ အတွက်ကတော့ နေသာသပ လေညာက ဖြစ်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တခါ တရုတ်နဲ့ ရုရှတို့လို ဗီတိုအာဏာ သုံးခွင့်ရ လုံခြုံရေးကောင်စီ အမြဲတမ်း အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံကို အကျိုးစီးပွား မက်လုံးပေးပြီး အကာအကွယ် ယူထားနိုင်လေတော့ စစ်အစိုးရ ငရဲခွေးကြီးဟာ လွတ်ချင်တိုင်း လွတ်နေတော့တာပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ ဒီတကြိမ်မှာတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စစ်အစိုးရ ကြိုးဆွဲတိုင်းကနေတဲ့ သံတမန်ကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေလို့လည်း မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ဘာမှ အကျိုးမရှိနိုင်ဘူး၊ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေ၊ သံတမန် စေလွှတ်နေတာတွေဟာလည်း ဘာမှ အရာမရောက်တဲ့အတွက် သူမအနေနဲ့ အရေးတယူ လက်ခံဆွေးနွေးနေရင် သူ့ပြည်သူလူထုကို မှားယွင်းတဲ့ အားကိုး ယုံကြည်မှုတွေ ပေးနေရာ ကျတော့မယ်လို့ ယုံကြည်လာတဲ့အတွက် တွေ့ဆုံဖို့ ငြင်းဆိုလိုက်တာ ဖြစ်မှာပါပဲ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်ဟာ စစ်အစိုးရက ခင်းပေးတဲ့အတိုင်း မျှောလိုက်မနေဘူး၊ နိုင်ငံတကာ သံခင်းတမန်ခင်းအရ အခွင့်အရေး ရသမျှ ဆွေးနွေးပြီးရင်း ဆွေးနွေး မျောမနေဘူးဆိုတာ၊ ခိုင်မာပြတ်သားတဲ့ ယုံကြည်မှု ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချနိုင်လုပ်နိုင်တယ်၊ လုပ်ရဲတဲ့သတ္တိ ရှိတယ်ဆိုတာကို အထင်အရှား ပြသလိုက်တာပါပဲ။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ အမျိုးသားလွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးရာ ကော်မီတ၊ီ အပြည်ြပည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ မီဒီယာရေးရာ ဥက္ကဌ Son Chhay ကတော့ "သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး (ကုလ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့ မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ) မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ခံစားနေရတဲ့ ဒုက္ခတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး အဲဒါတွေအတွက် အဖြေရှာပေးပါမယ်လို့ ကတိပေးထားခဲ့ကြတယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ အခုထိ ဒီကတိတွေအတိုင်း လောက်လောက်လားလား လုပ်ပြတာ၊ လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်တာ ဘာတခုမှ မတွေ့ရသေးပါဘူး" တဲ့။
"ကျနော်တို့က ပိုပြီးလေးနက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို လိုချင်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်အနေနဲ့ တခြား တယောက်ယောက်ကို ခန့်အပ်သင့်ပါတယ်" လို့ မကြာသေးခင်က ပြောဆိုဝေဖန်သွားခဲ့ပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင် အစိုးရကတော့ ဘယ်အဖွဲ့အစည်း၊ ဘယ်နိုင်ငံတွေရဲ့ ပြောစကား၊ မေတ္တာရပ်ခံချက်၊ သတိပေးချက်ကိုမှ လက်မခံဘဲ စစ်အာဏာ တည်မြဲရေးအတွက် တဖက်သတ် ရေးဆွဲထားတဲ့ အခြေခံဥပဒေကို အတင်းပြဌာန်း၊ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အသိအမှတ် မပြုတော့ဘဲ ရွေးကောက်ပွဲသစ် ကျင်းပဖို့ အတင်းစီစဉ်၊ ဒီမိုကရေစီလိုလားသူ ထောက်ခံသူတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို အင်အားသုံး ပိတ်ပင်တားဆီး၊ တက်ကြွှလှုပ်ရှားသူတွေကို ဥပဒေမဲ့ ဖမ်းဆီး ထောင်ချနေတာတွေကို တိုးမြှင့်၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ဒီမိုကရေစီရေးတွေကို ပိုပြီး ချိုးဖောက်လာတာတွေကို တွေ့နေရပါပြီ။
တကယ်တော့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်ကတည်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သူမရဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဟာ စစ်အစိုးရရဲ့ မတရား ဖိစီးနှိပ်ကွပ်မှုတွေ၊ ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို အများကြီးသည်းခံ အလျှော့ပေး ဆက်ဆံလာခဲ့ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ လူထုထောက်ခံမဲ အပြတ်အသတ်နဲ့ အနိုင်ရပြီးတော့လည်း ဒီလိုပါပဲ။ အမြဲလျှော့ပေးပြီး အပျော့ပြောင်းဆုံး ဆက်ဆံခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အကောင်းဆုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ကမ်းလှမ်းပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စစ်အစိုးရဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မြင်သာထင်ရှား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ ဒီပဲယင်း လူသတ်ပွဲကြီးအပြီး အသက်အန္တရာယ်က သီသီကလေး လွတ်မြောက်လာတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်နဲ့ ဒုဥက္ကဌ ဦးတင်ဦးကို ဆက်ပြီး မတရား ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားခဲ့ပါတယ်။
ဒါကိုလည်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ပြည်သူလူထုကြီးက သည်းခံအလျှော့ပေးခဲ့တာပါပဲ။ ရက်စက် ကြမ်းတမ်းလွန်းတဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့် မနိုင်လို့ သည်းခံရခြင်းတွေကတော့ အများစုပေါ့လေ။
ဒီအချိန်မှာတော့ အနှစ်နှစ် အလလ မျောလာတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကြီးကို ပြန်စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် မဟာဗျူဟာသစ် နည်းပရိယာယ်သစ်တွေ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။ လူထုဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ ဒီအတိုင်းတော့ ဆက်ပြီး လက်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီး ကုလသမဂ္ဂသံတမန်ကြီးကို တွေ့ဆုံဖို့ကိုတောင် ငြင်းဆန်ပစ်ခဲ့ပါပြီ။ လူထုထောက်ခံမှု အများဆုံးရရှိထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါတီ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့လည်း လူထုက ယုံယုံကြည်ကြည် အပ်နှင်းထားတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို လူထုကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ဥပဒေတွင်း တိုက်ပွဲတွေ မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်းလုံး အုံးအုံးကျွက်ကျွက် တခဲနက် ဖြစ်ပေါ်လာအောင် ဦးဆောင်လမ်းညွှန်မှု ပေးဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါပြီ။ စစ်အစိုးရ ခင်းပေးထားတဲ့ လမ်းအတိုင်းလျှောက်၊ ဥပဒေကြောင်းအရ တောင်းဆိုကန့်ကွက်နေရုံနဲ့တော့ စစ်အာဏာရှင်အစိုးရဟာ ပြည်သူလူထု ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အာဏာကို ပြည်သူတွေလက်ထဲ ပြန်ပြီး အသာတကြည် ပေးအပ်လိမ့်မယ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအချက်ကတော့ အထူး သက်သေပြနေစရာ လိုအပ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျနော်က ယုံကြည်ပါတယ်။
ကျနော့်အမြင်အရတော့ စစ်အစိုးရဟာ "ပြုပြင်လို့မရအောင် ကမ်းကုန်နေပါပြီ"
အဲဒီတော့ လူထုအုံကြွမှုနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး အာဏာရှင်စနစ်ကို မြေလှန်ဖြိုလှဲပစ်ကြပါစို့။
ကုလရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်မှုကို ပြည်ပရောက် မြန်မာအတိုက်အခံများက စိန်ခေါ်
တနင်္ဂနွေနေ့၊ သြဂုတ်လ 31 2008 23:09 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ ကုလသမဂ္ဂတွင် မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေခြင်း၏ တရားဝင်မှုကို စိန်ခေါ်သည့် လှုပ်ရှားမှုတရပ်ကို စတင်သည့် အနေနှင့် စစ်အစိုးရ၏ အထွေထွေ ညီလာခံတွင် ကိုယ်စားပြု ပါဝင်နေမှုကို ပြန်လည် စဉ်းစားရန် ကုလသမဂ္ဂကို တိုက်တွန်းသည့် စာတစောင်ကို ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံ ပါတီများက ပေးပို့သွားမည်ဟု ပြောကြားလိုက်ကြပါသည်။
တိုင်းပြည်ကို တရားမဝင် အုပ်ချုပ်နေသည့် အစိုးရ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် မြန်မာ စစ်အစိုးရ၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တနိုင်ငံအနေဖြင့် ကိုယ်စားပြု ပါဝင်နေမှုကို ကန့်ကွက် ပယ်ချပါရန် တိုက်တွန်းထားသည့် စာတစောင်ကို စက်တင်ဘာလဆန်းတွင် ကုလသမဂ္ဂသို့ ပေးပို့သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် အတိုက်အခံ အင်အားစုများ၏ ပေါင်းစု အဖွဲ့အစည်းတရပ် ဖြစ်သော ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားကောင်စီ (NCUB) က ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
"ဒါတွေက စီစဉ်ထားပြီးသား ကိစ္စတွေပါ။ ကျနော်တို့ ရှေ့လဆန်းမှာ စာပို့ပါမယ်" ဟု NCUB ၏ တွဲဘက်အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး (၂) ဦးမျိုးဝင်း က ပြောဆိုသွားခဲ့ပါသည်။
"ကျနော်တို့ ဒီလှုပ်ရှားမှုကို စခဲ့တာ တော်တော်ကြာကြာ ကတည်းကပါ။ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေး နေပါတယ်" ဟု ဦးမျိုးဝင်းက ဆက်လက် ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
ဤသို့ စိန်ခေါ်သည့် လှုပ်ရှားမှုကို မိမိတို့ လွန်ခဲ့သော နှစ်ကတည်းက ကြေငြာထားခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် တရားဝင်ဖြစ်မှု ဆိုသည့် ပြဿနာကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းသည့် နည်းဖြင့် စစ်အစိုးရက ဖြေရှင်းစေလိုသောကြောင့် စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် စစ်အစိုးရသည် ထိရောက်သည့် နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးမှုများကို အကောင်အထည်ဖေါ်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး ယင်းတို့၏ အဆင့် ၇ ဆင့်ပါ လမ်းပြမြေပုံအတိုင်း ဆက်လက် လျှောက်လှမ်းနေသည့်အတွက် ယခုအခါ မိမိတို့ အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် ဤစိန်ခေါ်သည့် လှုပ်ရှားမှုကို စတင်လိုက်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် ဤအဖွဲ့ကြီးက ပြောဆို သွားခဲ့ပါသည်။
စစ်အစိုးရသည် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြုသည့် ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ ဆိုသည်ကို မဲလိမ်မဲညစ်၍ မေလ အတွင်းက ဇွတ်အတင်း ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မဲဆန္ဒရှင် ၉၈ % က ထောက်ခံသည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။ ဤလုပ်ရပ်ကြောင့် မိမိတို့အနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂကို ဤသို့ စစ်အစိုးရ၏ တရားဝင်ဖြစ်မှုကို ပြန်လည် သုံးသပ်ပေးရန် တောင်းဆိုရသည့် အခြေအနေအထိ ဖြစ်လာရကြောင်းဖြင့် NCUB က ပြောဆိုသွားပါသည်။
"ဒီကင်ပိန်းကို လုပ်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီရပြီး တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း အုပ်စုအားလုံးရဲ့ အခွင့်အရေးကိုလဲ အာမခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်" ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် - လွတ်မြောက် နယ်မြေ NLD-LA ၏ နိုင်ငံခြားရေး တာဝန်ခံ ဦးညိုအုန်းမြင့်က ပြောကြားသွားပါသည်။ ဤအဖွဲ့သည် NCUB ၏ အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့အစည်းတခုလည်း ဖြစ်သည်။
ဤကင်ပိန်းကို လုပ်ခြင်းအားဖြင့် စစ်အစိုးရ၏ ရည်ရွယ်ချက် အစစ်အမှန်ကို ကုလသမဂ္ဂဝင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းကို ရှင်းလင်း တင်ပြနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ သူတို့ ကြေငြာထားသည့် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပမည်ဆိုသည့် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း မဲလိမ်မဲညစ်ဦးမည့် အန္တရာယ်ကိုပါ ကာကွယ် ပေးသွားနိုင်မည် ဖြစ်သည်ဟု ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်းများက ပြောကြားသွားကြပါသည်။
"ဒီကင်ပိန်းကို လုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် စစ်အစိုးရကို ကာကွယ်ပေးနေတဲ့ ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေမှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာမယ်။ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းကလဲ ကျနော်တို့နဲ့ ဆွေးနွေး လာရမယ်" ဟု ဦးညိုအုန်းမြင့်က ပြောသွားပါသည်။
နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ပါရန် မြန်မာအတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်းများက အကြိမ်ကြိမ် တောင်းဆိုနေသော်လည်း စစ်အစိုးရသည် နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းများကို အဆင့် ၇ ဆင့်ပါ လမ်းပြမြေပုံအရသာ ပြုလုပ်နေကြောင်းဖြင့် ကြေညာခဲ့သည်။ ဤလမ်းမြမြေပုံတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပါတီဖြစ်သော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အပါအဝင် အဓိက အတိုက်အခံ ပါတီများကို ဘေးဖယ်ထုတ်ထားပါသည်။
ဤလမ်းပြမြေပုံ၏ ပထမအဆင့်အဖြစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲရန် အမျိုးသား ညီလာခံ တရပ်ကို ၁၄ နှစ်ကြာ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ် မေလတွင် ဤဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြုရန် ဆန္ဒခံယူပွဲကို ကျင်းပခဲ့ပြန်သည်။ ထို့နောက် ပြည်သူများက သူတို့၏ ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေကို တခဲနက် ထောက်ခံခဲ့သည်ဟု စစ်အစိုးရက ကြေညာခဲ့သည်။ သို့သော် အတိုက်အခံများနှင့် ဝေဘန်သူများကမူ ဆန္ဒခံယူပွဲ ဖြစ်စဉ်သည် "လွတ်လပ်မျှတ" မှု မရှိဘဲ မဲလိမ်မဲခိုးခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု စစ်အစိုးရကို စွပ်စွဲ ပြောဆိုခဲ့သည်။
အကယ်၍သာ စစ်အစိုးရက ထိန်းသိမ်းခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များတို့နှင့် ၃ ပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲတရပ် ကျင်းပ ပြုလုပ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရှည်ကြာလှပြီဖြစ်သော နိုင်ငံရေးအရ ရှေ့မတိုး နောက်မဆုတ် ဖြစ်နေမှု ကို အဖြေရှာဖွယ် ရှိသည်ဟုဆိုလျှင် မိမိတို့အနေဖြင့် ဤလှုပ်ရှားမှုကို မလုပ်သေးဘဲ ဆိုင်းငံ့ ပေးထားမည်ဟုလည်း သူက ဆက်လက် ပြောဆိုသွားခဲ့ပါသည်။
"ကျနော်တို့ ဒီလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ရတာ မြန်မာနိုင်ငံကို မှန်ကန်တဲ့ နိုင်ငံရေး လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ရှိစေချင်လို့ပါ" ဟု ဦးညိုအုန်းမြင့်က ဆိုလိုက်ပါသည်။
ဤလှုပ်ရှားမှုသည် မြန်မာစစ်အစိုးရကို ဖိအားပေးနိုင်လိမ့်မည်။ အကြောင်းမူ လုံခြုံရေးကောင်စီ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင် ၅ နိုင်ငံ အပါအဝင် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများ အနေနှင့် ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်မှု စိန်ခေါ်မှု ကော်မတီ (Credential Challenge Committee) တွင် ဗီတို အာဏာသုံးပိုင်ခွင့် မရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟုလည်း သူက ဆက်လက် ပြောဆိုသွားခဲ့ပါသည်။
သို့သော် စစ်အစိုးရနှင့် ဒေသတွင်း နိုင်ငံများအနေဖြင့် ဤစိန်ခေါ်မှုကို တုံ့ပြန်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင် NCUB အနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများနှင့် နီးကပ်စွာ လက်တွဲဆောင်ရွက်ပြီး ကုလအထွေထွေ ညီလာခံတွင် မြန်မာစစ်အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်နေမှုကို စိန်ခေါ်မှုအား ဆက်လက် ပြုလုပ်သွားမည်ဟု NCUB က ပြောဆိုသွားပါသည်။
ဤအတောအတွင်း NLD အပါအဝင် မြန်မာ အတိုက်အခံ ပါတီများကလည်း ကုလအထူးသံတမန် မစ္စတာ အီဗရာဟင် ဂမ်ဘာရီသည် ၎င်း၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်များမှ ဘာမှ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရလဒ် ထွက်ပေါ်လာခြင်း မရှိခဲ့သည့်အတွက် မိမိ တို့အနေဖြင့် လက်ရှိ ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နေမှုများကို ကျေနပ်အားရခြင်း မရှိကြောင်း ပြောဆိုလိုက်ပါသည်။
မြန်မာအမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းများ၏ ထီးရိပ် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော ထိုင်းနိုင်ငံအခြစိုက် အမျိုးသမီး အဖွဲ့ချုပ် (WLB) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး မနန်းယဉ် ကမူ မြန်မာစစ်အစိုးရသည် လူထုက ရွေးကောက် တင်မြှောက်ထားသော အစိုးရ မဟုတ်သည့်အတွက် ကုလသမဂ္ဂတွင် ရရှိထားသော နေရာနှင့် မထိုက်တန်သောကြောင့် ဤလှုပ်ရှားမှုကို ထောက်ခံ သဘောတူပါကြောင်း ပြောဆိုသွားခဲ့ပါသည်။
"ဒီကိစ္စဟာ ဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စမို့ ဒီလှုပ်ရှားမှု အောင်မြင်တယ် ဆိုရင် ကောင်းပါတယ်" ဟု မနန်းယဉ် က ပြောသွားပါသည်။
သို့သော် WLB သည် မြန်မာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကို ဟိဂ်မြို့ရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှု ခုံရုံးသို့ တရားစွဲဆိုတင် ပို့နိုင်ရန်ကိစ္စကို အာရုံစိုက် ဆောင်ရွက်နေရသဖြင့် ယခု NCUB ၏ လှုပ်ရှားမှုတွင် အတူတွဲဖက် ပါဝင်နိုင်ခြင်း မရှိပါကြောင်း ပြောဆိုသွားခဲ့ပါသည်။
အေးချမ်းမြေ့ | သြဂုတ် ၂၉၊ ၂၀၀၈
သူတို့မျက်နှာထားတွေက အားလုံး တပုံစံတည်း။ သူတို့ ကိုဖမ်းမိလို့ တုံ့ပြန်ပုံကလည်း တထေရာတည်း။ သူတို့အားလုံး၏ အရွယ်၊ သူတို့လာတတ်သည့်အချိန်၊ သူတို့ လုပ်ပုံ လုပ်နည်းများက အားလုံး တပုံစံ တည်းဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့ စမ်းချောင်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်နှင့် လှိုင်မြို့နယ်တို့တွင် ကျက်စားနေသော ကလေး သူခိုး ကလေးများအကြောင်းကို စမ်းချောင်းသား တဦးက ပြောပြနေခြင်းဖြစ်၏။
ကလေးများ၏ အရွယ်မှာ ၁၂ နှစ် ၁၃ နှစ် ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီး အုပ်စုတစုလျင် အနည်းဆုံး ကလေး ၃ ဦးမှ ၆ ဦးထိ ပါဝင် သည်ဟု သူကဆိုသည်။
“ကျနော်တို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာတင် မိတာ ၉ ခါလောက်ရှိပြီ” ဟု သူက ပြောသည်။ ကလေး များ အဓိက ယူသည့် ပစ္စည်းများမှာ အဝတ်အထည်၊ ဖိနပ်၊ အမ်ပီသရီး ပလေယာ၊ စတီးချိုင့် စသည့် တန်ဖိုးအလွန်မကြီး သော ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
သူတို့ပုံစံက လမ်းထဲတွင် ပလတ်စတစ်ကောက်သည့် ပုံစံအတိုင်း ပီနံအိတ်ခပ်ကြီးကြီး တလုံး လွယ်ထားသည်။ ခိုးယူထား သည့်ပစ္စည်းများကို အောက်တွင်ခံကာ အပေါ်တွင် ပလတ်စတစ်ပစ္စည်း အစုတ်များ ဖုံးထားတတ်သည်ဟု ဆိုသည်။
“ဖမ်းမိတဲ့သူတွေက ကလေးတွေပဲဆိုပြီး ပြောဆို ပြန်လွှတ်ကြတာပဲ။ ဒါပေမယ့် မိတဲ့ ကလေးအားလုံးက ဖြေတာ တပုံစံ တည်းဖြစ်နေတယ်။ ပလတ်စတစ်ကောက်ရင်း ဒီပစ္စည်းကို တွေ့လို့ ယူမိတာပါ လို့ဖြေတယ်” ဟု စမ်းချောင်းသားက ပြောပြသည်။
တန်ဖိုးနည်း ပစ္စည်းများဖြစ်ခြင်း၊ ခိုးယူသူတို့မှာ ကလေးများ ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ပစ္စည်း ပျောက်သူတို့မှာ ရဲစခန်းသို့မတိုင် တော့ဘဲ ပြန်လွှတ်လိုက်ကြသည်။ ထိုကလေးများက တန်ဖိုးကြီးမားသည့် ပစ္စည်းများကို ယူနိုင်သောအနေအထား ရှိသည့် တိုင် လုံးဝယူသွား ခြင်းမရှိကြောင်း သိရသည်။
“ဟန်းဖုန်းလို ပစ္စည်းမျိုး အလွယ်တကူတွေ့တာတောင် မယူဘူး” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ထိုနယ်မြေအတွင်းမှ ဒုရဲအုပ်အဆင့် ရှိသူတဦးက ကလေးများမှာ ကြည့်မြင်တိုင် ငါးဈေး တဘက်ကမ်း အေး ရွာမှ ဖြစ်နိုင် သည်ဟု သုံးသပ်သည်။ ၎င်းက ထိုကလေးများ၏ နောက်ကွယ်တွင် ကြိုးကိုင်စေခိုင်းနေသူ တဦး သို့မဟုတ် တဦး မက ရှိနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။
“အိမ်တအိမ်ကို ဝင်ရင် သွပ်ပြားကို ချိုးတာကအစ သပ်ရပ်တယ်။ သေသေချာချာ လေ့ကျင့် ထားတာသေချာတယ်။ အိမ်ထဲကို ကျွမ်းကျင်တဲ့ ၂ ယောက်ကဝင်တယ်။ အပြင်မှာ ကျန်တဲ့ လူတွေက စောင့်နေတယ်” ဟု ၎င်းကရှင်းပြသည်။
ကြည့်မြင်တိုင် မြို့နယ်တွင် နေထိုင်သည့် အမျိုးသမီးတဦးကလည်း သူ့အိမ်ဘေးခြံစည်းရိုးကို ထိုကလေးများခွာ၍ ဝင်နေစဉ် ဖမ်းဆီးမိဖူးသည်ဟု ပြောပြသည်။ စစ်မေးသည့်အခါ ကလေးများက ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပင် ဖြေသည် ဟု ဆို၏။
“ကြည့်မြင်တိုင် တဘက်ကမ်းကလို့ ပြောတယ်။ ခိုးလို့ရတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ကြည့်မြင်တိုင် ညဈေးမှာ သွင်းတယ်တဲ့။ အင်္ကျီ တထည် ခပ်လတ်လတ်ဆိုရင် ၅၀၀ လောက်ရတယ် ပြောတယ်။ ကြောက်လန့်ပုံတော့ လုံးဝမရဘူး” ဟု ၎င်းကပြောပြသည်။
ညပိုင်းတွင် ထိုကလေးများမှာ ညလုံးပေါက် နေထိုင်၍ ရသော သီရိမင်္ဂလာ ကုန်စိမ်း ဈေးတွင် အချိန်ဖြုန်းလေ့ရှိသည်တဲ့။
“ကြည့်မြင်တိုင် တဘက်ကမ်းမှာတော့ အဲဒီလို ကလေးတွေ အများကြီးပဲ။ အိမ်ခြေရာမဲ့တွေ၊ မိဘမဲ့ ကလေးတွေပေါ့” ဟု ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်အတွင်း နေထိုင်သည့် သတင်းထောက် တဦးကပြောပြသည်။ ၎င်းက ဆက်လက်၍ နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း နောက်ပိုင်းတွင် အမှုအခင်းများ ပိုမို ထူပြောလာသည်ဟု ဆိုသည်။
သြဂုတ်လဆန်းပိုင်းကလည်း စမ်းချောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဇေယျဝတီ စာသင်တိုက်တွင် ၁၃ နှစ်၊ ၁၄ နှစ် ဝန်းကျင်ရှိ မိန်းကလေး ၂ ဦး ယောက်ျားလေး ၃ ဦးတို့ ဝင်ရောက် ခိုးယူ ခဲ့ရာ မိန်းကလေး ၁ ဦးနှင့် ယောက်ျားလေး ၁ ဦးကို ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ချော့မေး၊ ခြောက်မေးတာ မရဘူး။ ဘုန်းကြီးက ရိုက်ပြီးမေးတော့မှ ကြည့်မြင်တိုင် တဘက်ကမ်း အေးရွာက လို့ဖြေတယ်” ဟု ၎င်းဇေယျဝတီကျောင်းတိုက်နှင့် နီးစပ်သူ တဦးက ပြောပြသည်။
ကလေး အရေအတွက် ၄၀၊ ၅၀ ဝန်းကျင်ခန့် ရှိနိုင်ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ စုရပ်မှာ ကြည့်မြင်တိုင် ဗားကရာနှင့် နတ်စင်လမ်း တို့ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ကြည့်မြင်တိုင် တဘက်ကမ်း အေးရွာ အပါအဝင် ရွာများမှ ကလေးငယ်များမှာ ညနေစောင်းသည်နှင့် စက်လှေစုငှားပြီး ရန်ကုန်မြို့အတွင်း တောင်းရမ်းစားသောက်ကြသည်ဟု ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ကမ်းနားလမ်းတွင်နေထိုင်သူ တဦးက ပြောပြသည်။
“ညနေပိုင်းမှာ မြို့ထဲထွက်တောင်းစားပြီး ည ၁၀ နာရီလောက်ကျတော့ သီရိမင်္ဂလာဈေးမှာ တညလုံး အချိန်ဖြုန်းကြတာ။ အဲဒီထဲက အကြီးပိုင်းတွေက မနက်အစောကြီး အိမ်တွေထဲ ဝင်ခိုးကြတာ” ဟု သူက ပြောပြသည်။
တောင်းစားသည့် ကလေးများကော ခိုးသည့်ကလေးများပါ အဖွဲ့နှင့်ဖြစ်ပြီး နောက်ကွယ်မှ စေခိုင်းနေသော ဂိုဏ်းထောင် ထားသူများ ရှိကြသည်ဟု သူကပြောပြသည်။ ထိုကလေးများနှင့် လူကြီးတချို့တို့ စာရင်းရှင်း နေကြသည်ကို မြင်ဖူးသည်ဟု သူကဆိုသည်။
“လေလွင့်ကလေးတွေ အရမ်းများတယ်ဗျ။ အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ပြားနေတဲ့ ကလေးတွေအတွက် ရင်လေးဖို့ ကောင်းတယ်။ သူတို့ကြီးလာရင် ဆိုပြီးတွေးတောင် မတွေးရဲအောင်ဘဲ” ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ယခုနောက်ပိုင်းတွင် စာနာတတ်သူများက မိဘမဲ့ဂေဟာများ ပရဟိတ ဂေဟာများ ထူထောင်လာကြသော် လည်း မိဘမဲ့ ကလေးများထဲမှ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းမျှကိုပင် လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း အဖြူရောင်သက်တံ ပရဟိတ အဖွဲ့ဝင်တဦးက ပြောပြသည်။ ပရဟိတ ဂေဟာ အများစုမှာ လုပ်ချင်စိတ်အား ဖြင့်သာ ဖွင့်ထား ကြသော်လည်း အများစုမှာ အခြေခိုင်မာခြင်း မရှိဟု သူကဆိုသည်။
“လှည်းကူးက ဝိတိုရိယ ကလေးဂေဟာဆိုရင် ကလေး ၅၀ ကျော်ရှိတယ်။ ကလေးအားလုံးကို ကျောင်းထား ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးတွေကလယ်ကွင်းထဲမှာ တဲထိုးပြီးနေရတယ်” ဟု သူကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့သည့် အဖြစ်အပျက်ကို ပြောပြသည်။
ထိုဂေဟာမှကလေးများမှာ နေ့စဉ် သောက်သုံးရေခပ်ကြရပြီး ချက်ပြုတ်ရန် ထင်းခွေထွက်ရသည်။ အလှူရှင် မရှိ၍ အဆင်မပြေသည့် နေ့များတွင် ထမင်းမစားရဘဲ ဆန်ပြုတ်သာ သောက်ရသည်တဲ့။
တချို့သော ကလေးဂေဟာများမှ ကလေးများကို အရွယ်မရောက်သေးခင်မှာပင် နိုင်ငံတော်က ခေါ်ယူကာ စခန်းသွင်း လေ့ကျင့်ပေးမှုများ အများအပြားရှိကြောင်း မကြာသေးခင်ကမှ အငြိမ်းစားပေးခံခဲ့ရသော ဗိုလ်မှူး ဟောင်းတဦးက ပြောပြသည်။
“ရဲမွန်တပ်မြို့က စခန်းသွင်း လေ့ကျင့်ပေးနေတဲ့ ကလေးတွေထဲမှာ အငယ်ဆုံးက ၉ နှစ်ပဲရှိသေးတာ တွေ့ဖူးတယ်” ဟု သူကပြောသည်။
ထိုကလေးများမှာ ဘဝအခြေမခိုင်ခင်မှာပင် မြန်မာ့တပ်မတော်၊ ရဲ၊ အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းရေး အထူးတပ်ဖွဲ့၊ လုံထိန်း စသည့် နေရာများသို့ ရောက်သွားကြရသည်ဟု ဆက်ပြောသည်။
“တကယ်တော့ သူတို့မှာ ဘာအပြစ်မှ ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ဘဝက အဖြူထည်သက်သက်ပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့အနာဂတ် တွေကတော့ ကြောက်စရာကောင်းတယ်” ဟု ဗိုလ်မှူးဟောင်းက စိတ်မချမ်းမြေ့စွာ ဆိုသည်။
နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းနောက်ပိုင်းတွင် မိဘမဲ့ကလေး အမြောက်အများချီ၍ ကျန်ခဲ့သည်။ ထိုကလေးများအတွက် နိုင်ငံ တော်က ပြုလုပ်ပေးသော မည်သည့်အစီအစဉ်မှ မည်မည်ရရ မကြားရသေးပေ။
“ခက်တာက နိုင်ငံတော်ကလည်း ဘာမှမလုပ်ပေး၊ ကျနော်တို့လို ပြည်တွင်းက ပရဟိတ အလှူရှင်တွေ အနေနဲ့လည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ခွင့်မရ၊ ပေးနိုင်သလောက် ကျပြန်တော့လည်း ဆင့်ပါးစပ် နှမ်း ပက် သလောက်ပဲရှိတာ” ဟု ကလေးသူငယ် ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး လူမှုဝန်ထမ်း တဦးက စိတ်ပျက်လက်ပျက် ကောက်ချက်ချသည်။
ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအတွင်းအချို့ခေါင်းဆောင်တွေဟာ အန်ဂျီအိုတွေ ကထောက်ပံ့ငွေတွေကို ရိုက်စားလုပ်နေကြတဲ့အတွက်လူထု နစ်နာ တိုင်းပြည်နစ်နာနေတာတွေကို သကြားမင်းကြီး ကြည့်ပြီး စိတ်ပျက်နေသတဲ့။ တံခါးပြည်တွင်းမှာလည်း နအဖ ခေါင်းဆောင်တွေက အန်ဂျီအိုတွေကထောက်ပံတာကို လူထုဆီမရောက်နိင်အောင်ရိုက်စားလုပ်နေကြပြန်တယ်၊
ဒီတော့ ဒီလူတွေကို ဆုံးမဖို့ သကြားမင်းကြီးကစောင့်ကြည့်ရေး ဌာနတခုဖွင့်လိုက်တယ်၊ ဒီဌာနအတွက် ဘားမားအိပ်စပတ် ညွန်ကြားရေးမှုးတယောက်ခန့်အပ်ဖို့လိုလာတယ်၊တာဝရိန်သာက အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ ဘွဲ့ရနတ်တွေအများကြီးလာလျောက်ကြတယ်၊ သကြားမင်းကြီး အင်တာဗျူးတာကို အဖြေအားလုံးကိုမှန်အောင်ဖြေနိင်တဲ့ နတ်သားတယောက်ပဲရှိတယ်၊ သူရဲ့အင်တာဗျုးကို သုတေသနပြုသူများအတွက်လေ့လာနိင်ဖို့ ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
သကြား - ပေါတာကြီး သန်းရွေ နဲ့ ငရဲမင်း ကိုဘယ်လိုခွဲခြားသိနိင်သလည်း၊
နတ်သား - ခွဲခြားလို့မရနိင်ပါ၊
သကြား - မြန်မာနိင်ငံသားတယောက် နိင်ငံခြားကိုသွားရင် ဗီဇာမလိုပဲ သွားနိင်တဲ့ နိုင်ငံတခုပဲရှိတယ်၊ ဒီနိင်ငံကဘယ်နိင်ငံလည်း ၊
နတ်သား - ငရဲပြည်ဖြစ်ပါတယ်၊
သကြား- အရက်အလကားသောက်လို့ရတဲ့နေရာ ဘယ်မှာရှိလည်း
သကြား- မဆလခေတ် နဲ့ နအဖခေတ်တွေအောက်မှာ မြန်မာတွေရဲ့ အခြေအနေခြားနားမှု
နတ်သား- မဆလခေတ်က လူတွေမှာငွေရှိသေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ၀ယ်စရာပစ္စည်းမရှိဘူး၊ နအဖ ခေတ်မှာ လူတွေကငွေလုံးဝမရှိကြဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ၀ယ်စရာပစ္စည်းတွေက အများကြီးရှိနေတယ်၊
သကြား - နောက်ထပ်ရွေးကောက်ပွဲအသစ်လုပ်ရလဒ်ကဘာဖြစ် လာနိင်သလည်း။
နတ်သား- ဖြေဖို့မလွယ်ပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့နောက်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ကို နအဖက ခိုးပြီးဖြစ်နေလို့ပါ၊
သကြား - လက်ရှိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အလုပ်အမှုဆောင်တွေ နဲ့နအဖ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးတွေကြားမှာ အဓိကခြားနားချက်ကိုလိုရင်းတိုရှင်းပြောပါ ၊
နတ်သား - အန်အဲလ်ဒီက ခမောက်ဆောင်းတယ်၊ နအဖက စစ်ဦးထုတ်ဆောင်းတာပဲခြားနားပါတယ်၊
သကြား- အန်အဲလ်ဒီ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ နအဖ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ခြားနားချက်ကိုပြောစမ်း ၊
နတ်သား- နအဖက ခေါင်းဆောင်တွေ မကြာခဏပြောင်းပေးတယ်၊လူသစ်တွေနဲ့ မကြာခဏ အစားထိုးပေးတယ်၊ အန်အဲလ်ဒီ အမှုဆောင်အဖွဲ့ကသေမှပဲပြောင်းမယ်၊
သကြား - မဆလခေတ် အလုပ်သမားအစည်းရုံးက ကေဒါနဲ့အက်တီယူဘီက အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်ကြား ဘာခြားနားသလည်း၊
နတ်သား - မဆလ အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်က သရီတူးသရီးစီးတယ်၊အက်ဖ်တီင်္ယူဘီအလုပ်သမားခေါင်းဆောင်က စက်တက်လိုက်ဖုံးကိ်ုင်တယ်၊
သကြား- မဆလခေတ်အလုပ်သမားဝန်ကြီးနဲ့ အက်တီယူဘီအတွင်းရေးမှုးမောင်မောင် ကိုဘယ်လိုခွဲမလည်း၊
နတ်သား- ခွဲလို့မရနိင်ပါ၊ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အလုပ်သမားဝန်ကြီးက အလုပ်ဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတာကို အလုပ်သမားတွေမသိနိင်ပါ၊မောင်မောင် ဘန်ကောက်မှာ ဘယ်နေတယ်ဆိုတာလည်း ဘယ်သူမှမသိနိင်ပါ၊
သကြား- ၁၉၈၈ခုနစ်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတုန်းကခရစ်စတိုဖါဂါးနက်နဲ့ ဘီဘီစီဦးနေ၀င်း နှစ်ယောက်ထဲ ရှိတုံးက ၈၈ လှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်၊ဒီနေ့သတင်းထောက်တွေအများကြီး ဖြစ်လာမှ ဘာလို့လှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်မလာတာလည်း၊
နတ်သား- လှုပ်ရှားသူတွေက သတင်းထောက်တွေချည်းဖြစ်ကုန်လို့ပါ၊
သကြား- နအဖ ထုတ်သတင်းစာတွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေထုတ်သတင်းစာ ဘာကွာလည်း၊
နတ်သား- နအဖ ထုတ်သတင်းစာက စာရွက်သားညံတယ်၊ ဒီမိုကရေစီထုတ်သတင်းစာတွေကစာရွက်သားကောင်းတာပဲကွာပါတယ်၊
သကြား- RFA ဦးစိုးသင်းနဲ့နအဖ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဆန်း မှာ တူညီတဲ့အရည်အချင်းတခုကိုဖေါ်ပြပါ၊
နတ်သား- နစ်ယောက်စလုံး သတင်းမရေးတတ်ကြပါ၊
သကြား- မြန်မာ သတင်းထောက်နဲ့ မြန်မာ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူကိုဘယ်လိုခွဲမလဲ။
နတ်သား- နေ့အချိန်တွင်ခွဲခြားလို့မရနိင်ပါ၊ ညအချိန်မှသာခွဲခြားနိင်ပါတယ်၊ တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူကညဖက်အိပ်ချိန်တွင်ပုဆိုးခြုံအိပ်ပါတယ်၊ သတင်းထောက်က ဟော်တယ်လ်မှာ အိပ်ပါတယ်၊
သကြား- ကုလသမဂ္ဂ လက်ထောက်အတွင်းရေးမှုးဂန်ဘရီရယ် ရန်ကုန်သွားတုံးက
နတ်သား - နစ်ခုစလုံးမဟုတ်ပါ၊ နန္နာလှိုင်နဲ့အရင်ဆုံး တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၊
သကြား- ဂန်ဘရီရယ်က မြန်မာကိစ္စကိုလုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းဝေးမှာ တင်သွင်းနေချိန်မှာ အစည်းဝေးပြီးအောင်တောင်မနေသွားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင် ဘယ်လိုယူဆပါသလည်း
နတ်သား- နန္နာလှိုင် ဆီက ဖုံးလာတာလို့ ယူဆနိင်စရာရှိပါတယ်၊
သကြား- မြန်မာအရေးကို လုံခြုံရေးကောင်စီပေါ်မှာမတင်သင့်ဘူးလို့ ကန့်ကွက်တဲ့ ရုရှား၊ တရုပ်နဲ့ ဂျပန်နိင်ငံတွေ ရဲ့မြန်မာပြည်ပေါ်မှာ ရပ်တည်ချက်ဟာဘာလဲ။
နတ်သား- Asses of Evil တွေဖြစ်ပါတယ်၊
သကြား- ဂျပန် နိင်ငံရပ်တည်ချက်ပြန်ပြောင်းလာအောင်ဘယ်လို လုပ်ဖို့ မြန်မာတွေ ဘာအလုပ်သင့်ဆုံးလည်း၊
နတ်သား- ဒေါက်တာစိန်ဝင်းကို ဂျပန်ကိုထပ်မလွတ်သင့်ပါ၊
သကြား- Congratulation! အမောင်နတ် သားကို အရည်အချင်းပြည့်မှီတဲ့အတွက်ရွေးချယ် လိုက်ပါပြီ၊
( မှတ်ချက် - ညောင်နှစ်ပင် ညီလာခံ စကာ စ က အီးမေးမှ တဆင့်ရရှိခဲ့သော ဟာသလေးအား ပြန်လည်ဖော်ပြပါသည် ..
အမှား အမှန် အရှုပ် အထွေးများအား တာဝန်မယူပါ .. အဟီးးး )
BY မလေးမေ ... 8/28/20080အကြံပြုခြင်း
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/26/20080အကြံပြုခြင်း
ပီနန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအား တွေ့ဆုံ လျှောက်ထားချက်များ
Penang Sayardaw Interview (July 9, 2008) Part5@ Yahoo! Video
Penang Sayardaw Interview (July 9, 2008) Part4@ Yahoo! Video
Penang Sayardaw Interview (July 9, 2008) Part3@ Yahoo! Video
ကုလသံတမန်ကို မြန်မာ အတိုက်အခံများက ဝေဖန်ပြစ်တင်
အင်္ဂါနေ့၊ သြဂုတ်လ 26 2008 14:11 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ သုံးပွင့်ဆိုင် ပင်မအုပ်စု (TCG) ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ချီးကျူးသည့်အတွက် ကုလကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ အီဗရာဟင် ဂမ်ဘာရီကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) က တနင်္လာနေ့က ဝေဖန်လိုက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေကို စစ်အစိုးရ ပြသည်ထက် ပို၍မြင်အောင် မကြည့်နိုင်ခဲ့ဘဲ အခြေအနေမှန်များနှင့် ကင်းကွာနေပြီး၊ သူ၏ ခရီးစဉ်အတွင်း တွေ့ဆုံရမည့် အစီအစဉ်များကိုလည်း စစ်အစိုးရက စီစဉ်ထားသည့် အတိုင်းသာ လိုက်ပါ လုပ်ဆောင်ကာ ကန့်ကွက် ဆန့်ကျင်ခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း အန်အယ်ဒီက ဝေဖန် ထောက်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
NLD ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက “သူ (ဂမ်ဘာရီ) က စစ်အစိုးရ စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း သွားပြီး သူတို့ ရုပ်ပြ လုပ်ထားတာတွေပဲ ကြည့်ခဲ့ရတော့ အခြေအနေမှန်ကို ဘယ်သိမှာလဲ။ တကယ့် အခြေအနေမှန်ကို ဒီလို အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ သိဖို့၊ နားလည်ဖို့ ဆိုတာလည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး” ဟု ပြောသည်။
ဆိုင်ကလုံး ဒုက္ခသည်များကို ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်နေသည့် TCG သည် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြား ထိရောက်သော ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုနှင့် လက်တွဲ ဆောင်ရွက်မှုတို့၏ နမူနာ ပြယုဂ်တခု ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီက ပြောဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရ၊ အာဆီယံနှင့် ကုလအဖွဲ့ကြီးတို့မှ စေလွှတ်သော ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် TCG သည် ဆိုင်ကလုံး နာဂစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရသူများကို လူသားချင်း စာနာသည့် အကူအညီအထောက်အပံ့များ ပေးသည်သာမက တိုင်းပြည်တွင်း အခြားနေရာများတွင် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကူအညီများကိုပါ ပေးအပ်သင့်ကြောင်းဖြင့်လည်း သူက ဆက်ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၆ ရက်ကြာခရီးစဉ်ကို စနေနေ့က အဆုံးသတ်ခဲ့သည့် နိုင်ဂျီးရီးယားလူမျိုး သံတမန်ကြီး၏ ဤမှတ်ချက် စကားသည် သြဂုတ်လ ၁၈ ရက် တနင်္လာနေ့က TCG အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံအပြီး ပေါ်ထွက်လာခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ယခုလို ကုလသံတမန်တဦးက လူသားချင်း စာနာထောက်ထားသည့် အကူအညီပေးရေး လုပ်ငန်းများကို လျှောက်ကြည့်၍ မှတ်ချက်များ ပေးနေခြင်းသည် သူ၏ အဓိက လုပ်ငန်းဖြစ်သည့် မြန်မာ့အတိုက်အခံ အုပ်စုနှင့် အစိုးရတို့အကြား နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက် လွယ်ကူချောမွေ့အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရေး လုပ်ငန်းကြီးကို လမ်းချော်သွားစေခဲ့သည်ဟုလည်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောကြားသည်။
“သူ (ဂမ်ဘာရီ) က စစ်အစိုးရကို အရမ်းကို မျက်နှာချိုသွေး နေတာပဲလို့ ကျနော်တို့ ခံစားရပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ သူလုပ်ရမယ့် အဓိက လမ်းကြောင်းကနေ လမ်းချော်သွားတာပဲ” ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
သူ၏ ၆ ရက်ကြာ မြန်မာပြည် ခရီးစဉ်အတွင်း မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီသည် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ အငယ်တန်း ဝန်ကြီးများနှင့်သာ တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပြီး စစ်အစိုးရ အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနှင့်သော်၊ ထိန်းသိမ်းခံ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့်သော် တွေ့ဆုံခွင့် မရရှိခဲ့ပါ။
ကုလသမဂ္ဂ နိုင်ငံရေးရာ လက်ထောက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်သည် စစ်အစိုးရအကြီးအကဲ သန်းရွှေနှင့် ထိပ်တန်း စစ်ခေါင်းဆောင်များ နေထိုင်ရုံးစိုက်ရာ တောတွင်းတွင် တည်ဆောက်ထားသည့် မြို့တော်သစ် နေပြည်တော်သို့ပင် လာရောက်ရန် ဖိတ်ကြားခြင်း မခံခဲ့ရဟု သတင်းရပ်ကွက်များက ပြောဆိုကြသည်။
စစ်အစိုးရသည် မစ္စတာဂမ်ဘာရီ၏ ခရီးစဉ်ကို သူတို့ အပေါ်ယံ လုပ်ဆောင်ထားသည့် ရုပ်ပြလုပ်ငန်းများကို ထုတ်ဖော်ပြသရန်နှင့် သူတို့အကျိုးအတွက် အသုံးချခဲ့သည်ဟု လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကြီး၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံ ဒေးဗစ်စကော့မက်သီဆင် (David Scott Mathieson) က ပြောသည်။
“မြန်မာပြည်ကို လာသမျှ သံတမန်တွေအားလုံးဟာ ဒီအတိုင်းချည်းပါပဲ။ နအဖ က ကြည့်စေချင်တာကိုပဲ ကြည့်ရတာပဲ။ ဒါနဲ့ပဲ နအဖ က ဟန်ပြလုပ်ထားတဲ့ ဟာတွေပဲ သူတို့ ကြည့်ခွင့်ရကြတာပဲ” ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလ အထူးသံတမန်အဖြစ် ၂ဝဝ၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် မစ္စတာရာဇာလီ အစ္စမေးလ် အပါအဝင် ယခင် ကုလသံတမန်များကို ရည်ညွှန်းကာ မက်သီဆင်က ပြောကြားသွားသည်။
“မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီဟာ နှစ်ဘက်လုံးကို ကြည့်ဖို့လိုတယ်” ဟုလည်း မက်သီဆင်က ပြောသည်။
ဤခရီးစဉ်အတွင်း ဒီချုပ်ခေါင်းဆောင်များနှင့် ၂ ကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ထိန်းသိမ်းခံ နိုဘယ်ဆုရှင်နှင့်လည်း တွေ့ဆုံခွင့်ရရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။ သို့သော် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ၏ ပြယုဂ်ခေါင်းဆောင်က သူနှင့်တွေ့ဆုံရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
သို့သော် ကုလသံတမန်ကြီးကမူ ကုလသမဂ္ဂ၏ ကြိုးပန်းဆောင်ရွက်မှုများ၏ အဆက်အဖြစ် ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းကြီး၏ အကြီးအကဲ မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ယခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် လာရောက် လည်ပတ်မည်ဟု ပြောဆိုသည်။
သို့သော် ပြည်ပရောက် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ နိုင်ငံခြားရေးဌာန တာဝန်ခံ ဦးညိုအုန်းမြင့်ကမူ အစိုးရနှင့် အတိုက်အခံ ၂ ဘက်စလုံးကို စေ့စပ်ဆွေးနွေးကြရန် သြဇာအာဏာသုံး ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုနိုင်လျှင် ဂမ်ဘာရီနှင့် ဘန်ကီမွန်းတို့၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်များသည် အချိန်ဖြုန်းခြင်း သက်သက်မျှသာ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ပြောဆိုသည်။
“ဒီအချိန်ဟာ စစ်အစိုးရက မတွေ့ချင်တဲ့ တစုံတဦးကို စေလွှတ်ပြီး အချိန်ဖြုန်းနေမယ့်အစား မြန်မာစစ်အစိုးရက လက်ခံ နားထောင်နိုင်မယ့် သံတမန်တွေကို ကုလသမဂ္ဂက စေလွှတ်ရမယ့် တကယ်အရေးကြီးတဲ့ အခြေအနေ ရောက်နေပြီလို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်” ဟု ဦးညိုအုန်းမြင့်က ပြောသည်။
ညီညွတ်ရေးကို ဘယ်လို တည်ဆောက်မလဲ
တနင်္လာနေ့၊ သြဂုတ်လ 25 2008 21:51 - မြန်မာစံတော်ချိန်
“ညီညွတ်ရေးကို ဘယ်လို တည်ဆောက်မလဲ”
“ရရှိပြီးသော ညီညွတ်ရေးကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းမလဲ”
ဤစာတမ်းကို ရေးသားရာတွင် မည်သည့် အာဃာတတရားမှ ထားရှိခြင်း မရှိပါ။ စာရေးသူ၏ လေ့လာထားရှိခဲ့သော ညီညွတ်ရေးနှင့် ပတ်သက်သော စာအုပ်စာတမ်းများနှင့် နှစ်ပေါင်း ၆ဝ ကျော်ခန့် နိုင်ငံရေးဘဝ အဖုံဖုံတွင် ကျင်လည်ခဲ့သော အတွေ့အကြုံ၊ သင်္ခန်းစာများကို ပေါင်းစပ် တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်သည် ပြီးပြည့်စုံသော နိုင်ငံရေးသမား မဟုတ်ပါ။ အဖက်ဖက်မှ လိုအပ်ချက်များ ရှိပါမည်။ သို့သော် ဤစာတမ်းကို မှန်ကန်သော၊ ဒီမိုကရေစီ ပြည့်ဝသော ညီညွတ်ရေး တည့်မတ်လိုခြင်း ဆန္ဒကို ဖုံးကွယ်ထားနိုင်ခြင်း မရှိတော့သဖြင့် ရိုးသားပွင့်လင်းစွာ တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မှားယွင်းချက်များ၊ လိုအပ်ချက်များ အမြောက်အမြား ရှိပါမည်ကို ကျနော် ဝန်ခံပါသည်။ အထက်ပါ လိုအပ်ချက်၊ မှားယွင်းချက်များ ရှိပါက ဖြည့်စွက်ပြုပြင်ပေးလျှင် ကျနော့် အနေဖြင့် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုလက်ခံရန် အဆင်သင့် ရှိနေပါသည်။ ၎င်းအတွက် ကူညီကြပါရန် လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
ကျနော့်ကိုယ်တွေ့ လေ့လာတွေ့ရှိသမျှတွင် ...
၁။ ပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်း ညီညွတ်ရေး၊
၂။ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတွင် - (က) နိုင်ငံရေးအဖွဲ့တွင်း ညီညွတ်ရေးနှင့် (ခ) နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများ ညီညွတ်ရေး (နိုင်ငံရေး တပ်ပေါင်းစုများအတွင်း ညီညွတ်ရေးများ) ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
(၁) ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ညီညွတ်ရေးများမှာ ပုဂ္ဂိုလ်တဦးနှင့်တဦး သစ္စာရှိမှု၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး (ငွေရေးကြေးရေး) ကိစ္စများ မပေါ်ပေါက်ရေးနှင့် သဘောထား ကွဲလွဲမှုများကို ဒေါသတရား ရှေ့မထားဘဲ တဦးနှင့်တဦး ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်း ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့် အသက်ထက်ဆုံး အခင်အမင်မပျက် ပူးပေါင်း သွားကြရမည်ဟု ထင်မြင် ယူဆပါသည်။
တဦး၏ အမှား သို့မဟုတ် မိမိ၏ အမြင်နှင့် ကွဲလွဲပါလျှင် တဖက်နှင့်တဖက် တိုက်ခိုက် အပုတ်ချခြင်းသည် မည်သို့သော ညီညွတ်ရေးကို မရနိုင်ပါ။ ယုံကြည်ချက်တခုတည်း တူညီခဲ့ပါလျှင် ဝေဖန်-ညီညွတ်-ဝေဖန်နည်း ... ... ဝေဖန်ရေးကြောင့် ညီညွတ်ရေးကို ဖြစ်စေပြီး ပိုမိုညီညွတ်ရန် အပြုသဘောဆောင်သော ဝေဖန်ရေး ဆက်လက် ကျင့်သုံးသွားရန် ဖြစ်ပါသည်။
(၂) နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းတွင် (က) နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ညီညွတ်ရေးသည် အထူးအရေးကြီး လိုအပ်ချက် ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အတွင်း ညီညွတ်ရေး၏ အဓိက လိုအပ်ချက်မှာ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ရပြီး ပါတီတွင်း ဒီမိုကရေစီ (၄) ရပ်ကို ကျင့်သုံးရမည်ဟု နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များက ဖော်ကျူးကြပါသည်။ ပါတီတွင်း ဒီမိုကရေစီမှာ အများသိရှိကြပါမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ သို့သော် အလျဉ်းသင့်၍ အကြမ်းအားဖြင့် ဖော်ပြပါမည်။
ဒီမိုကရေစီပါတီတွင် တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်သူများသည် အောက်ခြေမှ ရွေးကောက် တင်မြှောက်သူများ ဖြစ်ရပါမည်။ အထက်မှ အောက်ခြေပါတီ အဖွဲ့အစည်းများသို့ အချိန်မှန်မှန် ညွှန်ကြားရပါမည်။ အောက်ခြေ အဖွဲ့အစည်းများကလည်း အထက် အဖွဲ့အစည်းများသို့ မှန်မှန် အစီရင်ခံရပါမည်။ အများစု၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အနည်းစုက လိုက်နာ ကျင့်သုံးရပါမည်။ သို့သော် အနည်းစု၏ ယုံကြည်ချက်များကို အစည်းအဝေးများတွင် ထပ်မံ တင်ပြခွင့် ပြုရပါမည်။
နောက်ဆုံး အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ ပါတီတွင်းတွင် ပါတီ၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် ပြန်လည် ပြုပြင်သင့်သည့် နည်းဗျူဟာဆိုင်ရာများ ပါတီတွင်း ပုဂ္ဂိုလ်အရ ချို့ယွင်းချက်များကို အပြုသဘော ဝေဖန်ချက်များကို ပါတီ၏ အထက်အဆင့်နှင့် အောက်အဆင့်များကပါ ကျင့်သုံးရပါမည်။ ပါတီတွင်း ဝေဖန်သည့် ပါတီတွင်း မှားယွင်းချက်များကို ပြုပြင်နိုင်သော တခုတည်းသော နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး ပါတီတွင်း ဝေဖန်ရေး ပျက်သုဉ်းသွားပါက ပါတီတွင်း စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ထိခိုက် ပျက်စီးသွားနိုင်ပါသည်။
(ခ) နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်း အချင်းချင်း ညီညွတ်ရေး တနည်းဆိုရလျှင် တပ်ပေါင်းစု တည်ဆောက်ရာတွင် အထူးခက်ခဲမှုများ ရှိပါသည်။ အင်အားကြီးမားသော ပါတီ၊ ပါတီကြီးများ မိမိတို့နှင့် လာရောက် ပေါင်းစည်းသော အဖွဲ့အစည်းငယ်များကို မိမိတို့ ပါတီကြီး၏ လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများ သတ်မှတ်၍ ပါတီကြီးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ပြန်လည်ဝေဖန် သုံးသပ်ခွင့် မပေးဘဲ အတင်းအကျပ် နာခံ လုပ်ကိုင်စေခြင်းများသည် တပ်ပေါင်းစုကို ပျက်စီးစေသော အဓိကအချက် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေး တိုက်ပွဲတခု၊ သို့မဟုတ် လှုပ်ရှားမှုတခုခု လုပ်လျှင် တပ်ပေါင်းစုတွင်း ဆွေးနွေး၍ ပါတီကြီးငယ်များ အပြန်အလှန် ညှိနှိုင်း၍ လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤသို့ မကျင့်သုံးပါက တပ်ပေါင်းစု၏ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို အနည်းနဲ့အများ ထိခိုက်သွားပါမည်။
ဤစာတမ်းကို ညီညွတ်ရေး တည်ဆောက်ရေးအတွက် အထောက်အကူ ပြုနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်၍ တင်ပြပါသည်။ မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင် အခွင့်အာဏာအရ မိမိတို့ ဘာသာ ဆုံးဖြတ် ကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေ။
ဤစာတမ်းသည် ညီညွတ်ရေးအတွက် တခုသော အတိုင်းအတာ အထောက်အကူဖြစ်လျှင် ကျနော့်အတွက် အထူးဝမ်းမြောက်ပါမည်။
(စာရေးသူ နိုင်ငွေသိမ်းသည် မွန်အမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး ခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်သည်။)
- ပီတာအောင် (သတင်းသုံးသပ်ချက်) - (၂၅-၈-၂၀၀၈)
မစ္စတာဂမ်ဘာရီ၏ စတုတ္ထအကြိမ်မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်သည်ပြီးခဲ့သည့် စနေနေ့ကအဆုံးသတ် သွားခဲ့သော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် တွေ့ခွင့်မရသလို ဒေါ်အောင်ဆုကြည်နှင့်လည်း တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပေ။ သိသာထင်ရှားသည့်
ရလဒ် တစုံတရာထွက်မလာသဖြင့် အောင်မြင်မှုမရဘဲ အချိန်သာကုန်သည့် ခရီးစဉ်ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုက
ရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) အပါအ၀င် အတိုက်အခံအချို့ကရှုမြင်ကြသည်။
အန်အယ်လ်ဒီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက “ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ခရီစဉ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေက တခုမှ
အကောင်အထည် မပေါ်ဘူး။ ဆိုတော့ အဲဒီလို အခြေအနေမှာ ခရီးစဉ် အာင်မြင်တယ်လို့ ပြောလို့မရဘူး။ လာတာ
က နိုင်ငံရေးကိစ္စ၊ ကယ်ဆယ်ရေးကိစ္စတွေ လျှောက်ကြည့်နေတာဟာ အချိန်ဖြုန်းတာပဲပေါ့” ဟုဝေဖန်ပြောကြား
မစ္စတာဂမ်ဘာရီသည် ယခုခရီးစဉ်အတွင်း နအဖစစ်အစိုးရ၏ ပြောရေးဆိုခွင့် အာဏာပိုင်အဖွဲ့နှင့် (၂)ကြိမ်တွေ့ ဆုံ
ရာတွင် အဓိကအချက် (၅) ရပ်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သော်လည်း နအဖစစ် အစိုးရထံမှ သေချာရေရာသည့် အဖြေ
မစ္စတာဂမ်ဘာရီတင်ပြခဲ့သည့် အချက် (၅)ချက်အနက် ပထမအချက်ဖြစ်သည့် နအဖနှင့် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်
တို့ အကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သင့်သည်ဟု ယူဆကြောင်း မစ္စတာဂမ်ဘာရီ၏ပြောဆိုချက်
ကို နအဖ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဆန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံရေးကို ယခင်ဆောင်ရွက်
ခဲ့သည့် နည်းအတိုင်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဟုပြန်လည် တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
ယခင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်နည်း ဆိုသည်မှာ မည်သည့်နည်းဆိုသည်ကိုမှု ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဆန်းက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း
ပြောဆိုခဲ့ခြင်း မရှိချေ။ သို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေး၊ အလုံးစုံပျက်သုဉ်းရေး၊ စီးပွားရေး
ဖြတ်တောက်ရေးနှင့် အလုံးစုံပိတ်ဆို့ရေး (၄) ချက်ကို စွန့်လွှတ်မှသာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံမည်ဟု ဗိုလ်
ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက ပြောထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဆန်းက ပြီးခဲ့သည့်မတ်လက မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီခရီး
စဉ်၌ ပြောကြားထားသည်။ ယခုလည်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဆန်းက ထိုလေးချက်လမ်းစဉ်ကိုပင် ဆက်
လက်ကိုင်စွဲမည်ဟု ရည်ညွှန်းသည့်သဘော သက်ရောက်နေသည်။
ဒုတိယအချက်ဖြစ်သည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ၌ နိုင်ငံတကာ ယုံကြည်လက်ခံမှု ရရှိရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂ၏ ကျွမ်းကျင်
မှု အကူလက်ခံဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း မစ္စတာဂမ်ဘာရီ၏ ပြောဆိုချက်ကိုမူ နအဖပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးကပြန်လည် တုံ့
တတိယအချက်ဖြစ်သည့် မြန်မာပြည်သူတို့၏ လူမှုစီးပွားဘ၀ ပြန်လည်မြှင့်တင်ရန် စီးပွားရေး ဖိုရမ်ထူ ထောင်ပေးရေး
ကိစ္စကိုမူ စဉ်းစားလျက်ရှိကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးနှင့်ဆက်လက် ဆွေးနွေးသွားမည်ဟုသာ ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်
စတုတ္ထအချက်ဖြစ်သည့် မြန်မာနှင့်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး အကြား ပုံမှန်ဆက်ဆံရေး လမ်းကြောင်း ထူထောင်
လိုကြောင်း မစ္စတာဂမ်ဘာရီ၏ တင်ပြချက်ကို တတ်နိုင်သမျှ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဟုသာ ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်
ဆန်းက မယုတ်မလွန် တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် လူသားချင်းစာနာသည့် ရှုထောင့်မှ ထိန်းသိမ်းထားသည့် အသက်ကြီးရင့်သူများ နာမကျန်းဖြစ်
နေသူများ၊ မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဖြေရှင်းနိုင်မည့်သူများ ကိုပြန်လွှတ်ပေးမည်ဆိုပါက ပိုမိုအကျိုး
ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း မစ္စတာဂမ်ဘာရီ၏ ပြောကြားချက်ကို ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်ဆန်းက ကျနော်တို့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့
အမြဲတမ်း အဲဒီလို စဉ်းစား သုံးသပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ အစဉ်အလာရှိကြောင်းသာ မရေမရာဖြေကြား၏။
မြန်မာသတင်းစာပါ စစ်အစိုးရဘက်က ထုတ်ပြန်သည့် ဂမ်ဘာရီတောင်းဆိုချက် ၅ ချက်သည် အန်အယ်ဒီက ပြောသည့်
၅ ချက်နှင့် ကွဲလွဲနေသည့်အတွက် မည်သည့်အချက်က အမှန်ဆိုသည်မှာလည်း ရေရေ ရာရာမရှိပြန်ပေ၊ သို့သော် သေ
ချာသည့်အချက်မှာ ဂမ်ဘာရီတင်ပြခဲ့သည့်အချက် ၅ ချက်အပေါ် စစ်အစိုးရဘက်က မည်သည့်အချက်ကိုမျှ တိတိကျကျ ကတိပေးခဲ့ခြင်းမရှိသည်ကို တွေ့ရသည်
မစ္စတာဂမ်ဘာရီသည်ခရီးစဉ်အတွင်း သိသာထင်ရှားသည့် ရလဒ် တစုံတရာထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသည့်အပြင် ဒေါ်အောင်
ဆန်းစုကြည်နှင့်ရော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့်ပါ တွေ့ခွင့်မရခဲ့သဖြင့် ခရီးစဉ် မအောင်မြင်ဟု ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ
အမျိုးသား ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ သောင်းထွန်းကပြောသည်။
မစ္စတာဂမ်ဘာရီသည် တွေ့သင့်တွေ့ထိုက်သူများကိုမတွေ့ပဲ နအဖစီစဉ်ထားသူများကိုသာတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း တွေ့ဆုံရာ
တွင်လည်း ကုလသမဂ္ဂဆုံးဖြတ်ချက်ဘောင်ကို ကျော်လွန်၍ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စ တိုက်တွန်းမှုများ ပြောဆိုလာ
သည့်ခြင်းသည် ခရီးစဉ်မအောင်မြင်ရသည့် အကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာ သောင်းထွန်းက ဆက်ပြော
ကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့် မြန်မာ့အရေးရှေ့ဆက်ကိုင်တွယ်ရန် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီအစား ကိုယ်စားလှယ်အသစ်တယောက်
ပြောင်းရန်နှင့် လုပ်နည်းလုပ်ဟန် ပြောင်းလဲသင့်သော်လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဖြစ်မြောက်လာရန်မှာ နအဖစစ်အစိုးရ
အပေါ်တွင်သာ အဓိကမူတည်နေသည်ဟု ဒေါက်တာ သောင်းထွန်းက ယူဆသည်
၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးသခင်ချန်ထွန်းကလည်း “ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေရဲ့ အပေါ်မှပဲ လုံးဝတည်
နေတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ စိတ်မပြောင်းရင်တော့ နောက်တစ်ယောက်ပြောင်းလည်း လူ ပြောင်းလဲပြောင်းတာ
ပဲရှိမှာပေါ့။ ဘန်ကီမွန်းတောင်မှ နာဂစ်ကိစ္စ စာပေးတယ်၊ တယ်လီဖုန်းနဲ့ခေါ် တယ်၊ လူကိုယ်တိုင်လာတော့မှ အထိုက်အ
လျောက် လိုက်လျောပြီး လုပ်ကိုင်သွားတာ။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး တစ်ခွန်းမှပြောမသွားဘူး။ ခုမှ နိုင်ငံရေးအတွက်ပဲလာ
ပါမယ်ဆိုတော့ ဒီကျတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ အတွေ့ခံမလား မခံဘူးလားမသိဘူး။ သံသယရှိတယ်”ဟုပြောသည်။
ရခိုင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တွဲဘက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးအေးသာအောင် ကလည်း မစ္စတာဂမ်ဘာရီ
သည် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ တိုင်းရင်းသားပါတီများနှင့်တွေ့ဆုံကာ သဘောထားအမြင်များ တောင်းခံခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း ယင်းသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ နအဖတဖက်သတ်ဆုံးဖြတ်ထားသည့် လမ်းပြမြေပုံ (ရုဒ်မက်) အတိုင်းအတိုင်းလက်ခံ
ပြီး ဆက်လုပ်နေပါက အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလုပ်ငန်း အောင်မြင်မည် မဟုတ်ဟု ပြောသည်။
ခရီးစဉ်မအောင်မြင်ကြောင်း အတိုက်အခံများက ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြသော်လည်း တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုကိုရပ်ဆိုင်းပစ်ရန်
မလိုအပ်ဟု မစ္စတာဂမ်ဘာရီက မြန်မာနိုင်ငံမှမထွက်ခွာခင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ကုသမဂ္ဂအနေဖြင့် စေ့စပ်ဆွေးနွေးမှုဆက်လုပ်သွားရန်လိုအပ်ပြီး လုံခြုံရေးကောင်စီက ဗီတိုအာဏာသုံးနိုင်သည့် နိုင်ငံ
များအား ဆွဲဆောင်သိမ်းသွင်းနိုင်မှသာ မြန်မာ့အရေးအောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အလားအလာရှိမည်ဟု ယုံ
ကြည် သူတို့ကယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော် လတ်တလောဖြစ်ပွားနေသည့် ရုရှား-ဂျောဂျီယာ ပဋိပက္ခကြောင့် အမေရိ
ကန်နှင့် ရုရှားတို့ကြား တင်းမာသွားပြန်သည်။ ထို့ကြောင့် နဂိုကတည်းက မြန်မာကိစ္စ ဗီတိုအာဏာသုံး၍ ကန့်ကွက်နေ
သည့် ရုရှားနိုင်ငံကို ဆွဲဆောင် သိမ်းသွင်းနိုင်ရန်မှာ ပို၍ခက်ခဲမည့် အနေအထားဖြစ်သည်။
နအဖစစ်အစိုးရက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကိုလက်ခံလာစေရန် ကုလသမဂ္ဂနှင့်နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလိုအပ်
သကဲ့သို့ မြန်မာပြန်သူများကိုယ်တိုင်ပါဝင် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ဦးအေးသာအောင်နှင့် ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမား
ကြီး သခင်ချန်ထွန်းတို့က ယူဆသည်။ သို့သော် ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည်က မစ္စတာဂမ်ဘာရီအား မတွေ့ဆုံပဲငြင်းပယ်
လိုက်သည့် ဖြစ်ရပ်ကို ကြည့်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ၏ ဆောင်ရွက်မှုကို အယုံအကြည်မရှိတော့ ဟုကောက်ချက်ချသူတို့က
မစ္စတာဂမ်ဘာရီအား ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည်က မတွေ့ဆုံပဲ ငြင်းပယ်လိုက်ခြင်းသည် အကျိုးမရှိဘဲ ရေစုန်မျောနေ
သည့် ကုလသမဂ္ဂ၏ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်အား ရပ်ဆိုင်းရန်အချက်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု
ယူဆသူတို့ ကလည်း ယူဆကြသည်။ မတွေ့ဆုံရခြင်း၏ အကြောင်း ရင်းမှန်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်
ထုတ်ဖော် ပြောကြားမှသာ အဖြေမှန်သိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
အဆိုးထဲက အကောင်းဟူ၍ ပြောရလျှင် မြန်မာစစ်အစိုး သတင်းစာများကို ကျေဇူးတင်ဖို့ ကောင်းသည့်အချက်တခုရှိ
သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်ရှေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ချိတ်ဆွဲထားသည့် “အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်
တို့၏ လုပ်ငန်းကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်– ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း” ဆိုသည့် ဆိုင်းဘုတ်ကို
ဂမ်ဘာရီ၏ အရာရှိနှစ်ဦးနောက်ခံတွင် ထင်သာမြင်သာအောင် ဓါတ်ပုံနှင့်တကွ ကြော်ငြာပေးသည့်အချက် ဖြစ်သည်။
နအဖရဲ့ ရုပ်သေးဝန်ကြီးချုပ် (၃) ရုပ်
- ဗိုလ်ထက်မင်း (၂၅-၈-၂၀၀၈)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၀န်ကြီးဌာနတွေဟာ အကြီးအကျယ် လာဘ်စားမှုတွေနဲ့ အဘက်ဘက်က ယိုယွင်း ပျက်စီးနေပြီး
တော့ စီမံကိန်းတွေလည်း မအောင်မြင်ကြတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။ ၀န်ကြီးဌာနတွေရဲ့ အချုပ်ြဖစ်တဲ့ ၀န်ကြီးချူပ်
ဆိုသူတွေဟာလည်း ဗိုလ်သန်းရွှေကြိုးဆွဲရာ ကနေရတဲ့ ရုပ်သေးရုပ်တွေဖြစ်နေပြီး တိုင်းပြည်ကောင်းရာကောင်း
၂၀၀၃ ခုနှစ် မေလမှာ ဒီပဲယင်း အရေးအခင်းကြောင့် ဗိုလ်သန်းရွှေဟာ နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းနဲ့ ကြုံတွေ့နေခဲ့
ရပါတယ်။ အာဆီယံ ထိပ်သီး အစည်းအဝေး ကျင်းပခါနီး ဖြစ်တာမို့ ဂျပန်နိုင်ငံ အပါအ၀င် အိမ်နီးချင်း အာဆီယံ
နိုင်ငံများက ဒီပဲယင်းကိစ္စကို မေးမြန်းတော့မှာဖြစ်လို့ ထိပ်တိုက်တွေ့မယ့် အနေအထားရှိနေပါတယ်။ ဗိုလ်သန်းရွှေ
ဟာ နိုင်ငံရေးကစားကွက်ရွှေ့လိုက်ပြီး ဗိုလ်ခင်ညွှန့်ကို ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူး တိုးမြှင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဗိုလ်ခင်ညွှန့်က ၀န်ကြီးချုပ် ရာထူးယူမယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ အနေအထား ပျက်ယွင်းမှာ၊ ထိခိုက်သွားမှာ စိုးရိမ်ပြီး တောင်း
ဆိုချက်များ ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ တပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးအဖြစ်မှ တပ်မတော်ထောက်
လှမ်းရေးမှူးချုပ်ရုံးသို့ ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ဖြင့် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခွင့်နဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ကို ၄င်းရုံးအား တွဲဘက်ကိုင်တွယ်ခွင့် တောင်း
ဒီနေရာမှာ ဗိုလ်ခင်ညွှန့်ရဲ့ တပည့်များဖြစ်ကြတဲ့ ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်သိန်းအပါအ၀င် ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိများကို ဖွဲ့
စည်းပုံအသစ်ဖြစ်တဲ့ တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေးမှူးချုပ်ရုံးသို့ ပြန်လည်ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ မဟာဗျူဟာ
လေ့လာရေး ဌာနကြီးကိုတော့ တပ်မတော် လေ့ကျင့်ရေးအရာရှိချုပ်လက်အောက်သို့ ပြောင်းလဲထားရှိမယ့် အစီအစဉ်
ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအစီအစဉ်ကို ဗိုလ်မောင်အေးက အပြင်းအထန် ဆန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာရှိ မည်သည့်စစ်တပ်ဖွဲ့စည်းပုံ (War Establishment) မဆို ၀န်ကြီးချုပ်နဲ့ ထောက်လှမ်းရေး တွဲကိုင်ထား
တာမျိုး မရှိကြောင်း ထောက်ပြကာ အထက်ပါပြောင်းလဲမည့် အစီအစဉ်အား ဗိုလ်မောင်အေးက ဆန့်ကျင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါ
ဗိုလ်သန်းရွှေက သူ့ရဲ့ ထွက်ပေါက်အတွက် ဗိုလ်ခင်ညွှန့်ရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို လိုက်လျောပေးခဲ့ပြီး နောက်ထပ်
တောင်းဆိုမှုတခုဖြစ်တဲ့ လမ်းပြမြေပုံ (၇) ချက် ချပြရေးကိုလည်း ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ရုတ်တရက်ကြည့်ပါက ဟန်
ကျသလိုရှိပေမယ့် မကြာခင် ရုပ်သေးဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာပြီဆိုတာ ဗိုလ်ခင်ညွှန့်ဟာ ရိပ်မိလာပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ အသစ်ခန့်လိုက်တဲ့ အတွင်းရေးမှူး (၁) ဗိုလ်စိုးဝင်း၊ အတွင်းရေးမှူး (၂) ဗိုလ်သိန်းစိန်တို့ (၂) ဦးနှင့်
အတူ ၀န်ကြီးဌာနတွေကို ကွင်းဆင်းလှည့်လည်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခိုင်းလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗိုလ်ခင်ညွှန့်က အစိုး
ရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးတခုမှာ သူ့ဝန်ကြီးတွေကို “အစည်းအဝေး (၂) ကြိမ်၊ (၃) ကြိမ် လုပ်ပြီးရင် မင်းကိုပဲ ဆက်လွှဲပေး
မှာပါလို့” တပ်ချုပ်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက သူ့ကိုနှစ်သိမ့်စကားပြောခဲ့ကြောင်း ငြီးတွားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ သဘောကတော့
တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းမှာ ဗိုလ်ခင်ညွှန့်ကို လုပ်ပိုင်ခွင့် အပြည့်ပေးတော့မယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးပြောတာကို ဗိုလ်ခင်
ညွှန့်က မယုံကြည်တဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့နောက် ဒုတိယမြောက်ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာတဲ့ ဗိုလ်စိုးဝင်းကျတော့ မလေးရှားနိုင်ငံ အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး
မှာ မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအား မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်ပတ်ဖို့ ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တော့ ဗိုလ်
သန်းရွှေက ဒီလိုဖိတ်ကြားခဲ့တာကို ဆူပူကြိမ်းမောင်းတာမို့ မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးခမျာ မြန်မာနိုင်ငံ ၀င်မယ့်အ
ရေး ဆန့်ငင် ဆန့်ငင်ဖြစ်နေလို့ အာဆီယံမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာဟာ အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် ကျဆင်းသွားခဲ့ရ
ဒီလို ဗိုလ်သန်းရွှေရဲ့ မတရားကြိုးကိုင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုတွေကြောင့် လက်ရှိ ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးရတဲ့သူတွေဟာ နိုင်ငံ
တကာမှာ မျက်နှာပျက်ရမယ့်ကိန်း ဆိုက်နေပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် တွေဖြစ်လာတဲ့ ဗိုလ်စိုးဝင်းနဲ့ ဗိုလ်သိန်းစိန်
တို့အနေနဲ့ မူလက တွဲကိုင်ထားတဲ့ လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး အရာရှိချုပ်နဲ့ စစ်ရေးချုပ် အကြီးအကဲရာထူးများကို ဆက်လက်ကိုင်တွယ်ဖို့ ဗိုလ်ခင်ညွှန့်လို အခွင့်အရေး မရတော့ဘဲ နောက်တက်လာတဲ့ အရာရှိများကိုသာ လွှဲပြောင်းပေး
လိုက်ရတာကြောင့် တပ်မဲ့ဗိုလ်ဘ၀နဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် ရုံးအဖွဲ့ကိုသာ မှီခိုနေရပါတော့တယ်။
တတိယမြောက် ၀န်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာတဲ့ ဗိုလ်သိန်းစိန်ကတော့ နအဖရဲ့ သြဇာအာဏာ စီနီယာ အဆင့်အလိုက်မှာ ယခင်
ဗိုလ်ခင်ညွှန့် လက်ထက်က ၀န်ကြီးချုပ်အဆင့်ဆိုရင် နံပါတ် (၂) နေရာမှာ ရှိနေရာက သူ့အလှည့်ကျတော့ ဗိုလ်မောင်
အေးနဲ့ ဗိုလ်ရွှေမန်းရှိနေကြတဲ့အတွက် အလိုအလျောက် အဆင့် နံပါတ်(၄) သို့ ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ သူလည်းပဲ က
လေးစစ်သား မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း အမှန်အတိုင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးမှ ဗိုလ်သန်းရွှေရဲ့ ဆူပူမှုကိုခံရလို့ ပြန်လည်
နာဂစ်မုန်တိုင်း ၀င်နေချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ၀င်ပြီးကာစဖြစ်ဖြစ်၊ ၀န်ကြီးချုပ်ဗိုလ်သိန်းစိန်အနေနဲ့ ချက်ချင်း ကွင်းဆင်း ကြည့်ရှု
စစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်ကြောင်းသိပေမယ့် နအဖရဲ့အခြေခံဥပဒေ ဆန္ဒခံယူပွဲပျက်မှာ ကို စိတ်ပူနေတဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေကို မပြော
ရဲတဲ့ ဘ၀ ရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက တရုတ် ၀န်ကြီးချုပ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ဝေဖန်ခံရလို့ မုန်တိုင်း ကယ်ဆယ်ရေး
မှာ ကိုယ်တိုင်ပစ္စည်းတွေကို ထမ်းပိုးပေးရတဲ့ ကူလီထမ်းဘ၀အနေအထားထိ ရောက်သွားတဲ့ ရုပ်သေးဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်
သိန်းစိန်ရဲ့ အနေအထားဟာ မသက်သာလှတာကို တွေ့ ရပါတယ်။
အာဆီယံထိပ်သီး ညီလာခံတွေမှာ နိုင်ငံအကြီးအကဲအဖြစ် တက်ရောက်သူများဟာ အနည်းဆုံး နိုင်ငံရဲ့ သြဇာအာဏာ
အဆင့် (၂) ရှိသူတွေသာ တက်ရောက်ကြတာမို့ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေ ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ပေးဖို့ ဖိလစ်
ပိုင်နိုင်ငံက မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပေမယ့်လည်း ခေါင်းရှောင်ချင်တဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေရဲ့ သဘောသရုပ်ကြောင့် လက်လျှော့ခဲ့ရတဲ့
ဗိုလ်သန်းရွှေ တာဝန်ပေးခဲ့တဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးအဆင့်အတန်းဟာ နိုင်ငံတကာ မည်သည့် အစိုးရဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မှ မကိုက်
သမ္မတအုပ်ချုပ်တဲ့ သမ္မတနိုင်ငံတွေ ဖြစ်ဖြစ်၊ ၀န်ကြီးချုပ်အုပ်ချုပ်တဲ့ နိုင်ငံတွေကိုပဲ ကြည့်ကြည့် မြန်မာနိုင်ငံလို မတွေ့ရ
ဘဲ အာဏာရှင်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့ မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ၊ ကျူးဘားနိုင်ငံတွေနဲ့အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ တောင်အာဖရိက၊
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေရဲ့ အာဏာရှင် တွေတောင် နိုင်ငံတကာ ခေါင်းဆောင်တွေကို တွေ့ဆုံ တာဝန်ယူပြီး အထိုက်အလျောက် ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့တာ ရှိပါတယ်။
ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံကြီး တရုတ်နိုင်ငံမှာတောင် တိန့်ရှောင်ဖိန်ဟာ စစ်ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ယူခဲ့ပေမယ့် သမ္မတ ကျန်စီ
မင်းနဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် လီပင်းတို့ကို လုပ်ပိုင်ခွင့် အပြည့်အ၀ ပေးခဲ့တာ တွေ့ရပါ တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ်ကတော့ စီးပွားရေးကိုသာ ဦးတည်ပြီး လုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုအုံးတော့၊ တကယ် တမ်း စီးပွားရေးကို ဦးမော့လာအောင် လုပ်ရမယ့် နိုင်ငံခြားငွေ FE အမေရိကန်ဒေါ်လာ သုံးစွဲခွင့်နဲ့ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းအတွက် အ
ရေးကြီး ပစ္စည်း၊ သံချောင်းနဲ့ သံမဏိခွဲတမ်းတွေကို ခွဲဝေရာမှာတောင် ၀န်ကြီးချုပ်က လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘဲ ဗိုလ်သန်းရွှေက
သာ ဥစ္စာချောက်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားပြန်ပါတယ်။
စစ်အစိုးရလက်ထက် ၀န်ကြီးချုပ်ဆိုတာ ပြည်ပမှာသာမက ပြည်တွင်းမှာပါ ရုပ်သေးရုပ်ဘ၀အဖြစ်နဲ့ “က” နေရတာမျိုး ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်စိုးဝင်း သေဆုံးပြီးတဲ့နောက် မှာ ၀န်ကြီးတွေဟာ ရုပ်သေးဖြစ်နေတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့ရာထူးကို ခန့်အပ်ခံရဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
ဗိုလ်သန်းရွှေဟာ အမိန့်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါ ဖြစ်စေ၊ ကတိပေးပြီးတဲ့အခါဖြစ်စေ အင်မတန် ဗလောင်းဗလဲ ဖြစ်နေသူမို့ နိုင်ငံ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း အင်္ဂါရပ်နဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ စစ်တပ်အကြီးအကဲ အင်္ဂါရပ်နဲ့ ဘဲကြည့်ကြည့် မညီညွတ်တဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာမရှိ
တရုတ်သမ္မတ ကျန်စီမင်း လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့စဉ် ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းအတိုင်း တရုတ်လူမျိုးများ တရုတ်သဘောင်္
များနဲ့ မြစ်အတွင်း လှည့်လည်သွားလာခွင့်ပြုဖို့ ဗိုလ်သန်းရွှေက သဘောတူ ကတိပေးခဲ့ရာမှ နောက်နေ့မှာ သဘောမ
တူခဲ့ပြန်လို့ ဗိုလ်ခင်ညွှန့်က တရုတ်သမ္မတအား ငပလီကို ခေါ်ဆောင်ပြီး ချော့မော့ ဖြေသိမ့်ပေးခဲ့ရပါတယ်။
ပြည်တွင်းရော၊ ပြည်ပမှာပါ ရုပ်သေးရုပ်ဖြစ်နေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ်တွေရဲ့ အနေအထားကြောင့် နိုင်ငံတကာမှ
ပံ့ပိုးပေးမယ့် အခွင့်အလမ်းများ နစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာလည်း အဘက်ဘက်မှ အဖတ်ဆယ်
လို့မရအောင် ကျဆင်းနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဖြစ်ရတဲ့ အဓိကသမိုင်း တရားခံကတော့ ဗိုလ်သန်းရွှေသာ မလွဲဧကန်
ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက် ရပါတယ်။ ။
ဒေါ်စုပါဖို့မပါဖို့ထက်သေပြည်တော်မှာခိုလှုံခွင့်ရဖို့သန်းရွှေဆီတောင်းခံဖို့ပြင်ထားပေတော့ စမတ် ဆန်ဒါရ၀ပ်
ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးကို (PDA) ဖိအားပေး
Bangkok Post/ ၂၆ သြဂုတ် ၂၀၀၈
(PAD) အဖွဲ့၏ အဓိက ခေါင်းဆောင် ချမ်လောင်း ဆရီမောင်သည် (PAD) ဆန္ဒပြသူများကို ဦးဆောင်ပြီး ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ကြသည်။
ထိုအဖွဲ့သည် ၀န်ကြီးချုပ်စမတ်နှင့် ၀န်ကြီးအဖွဲ့အား ဖယ်ရှားရန် ကြိုးပမ်းသည့်အနေဖြင့် ၀န်ကြီး ချုပ်ရုံးတည်ရာသို့ လာသည့်လမ်းများကို ယနေ့မနက်ပိုင်း (၅) နာရီကတည်းက စတင်ပိတ်ဆို့ ထားကြသည်။ ထိုပိတ်ဆို့မှုများကြောင့် စမတ်နှင့် ၀န်ကြီးများသည် အပတ်စဉ် အစည်းအဝေး ကျင်းပရာနေရာကို ထိုင်းဘုရင်ကြည်းတပ် ဋ္ဌာနချုပ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသည်။
ဆန္ဒပြသူများသည် ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးခြံစည်းရိုးများကို ကျော်တက်ကာ ၀င်းထဲသို့ ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင် နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ ၀င်ရောက်ရန်အတွက် ခြံစည်းရိုးများ ဖွင့်ပေးကြသည်။
(PPP) ပါတီဦးဆောင်သည့် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရကို ဖြုတ်ချရန် ကြိုးပမ်းသည့်အနေဖြင့် (PAD) မှ ဦးဆောင်သော ဆန္ဒပြသူများသည် ယနေ့ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနသို့ ချီတက်ကြသည်။
နိုင်ငံ၏ အကျိုးအမြတ်များကို စံစားနေသည့် လက်ရှိအစိုးရ၏ လမ်းကြောင်းများထဲတွင် ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးသည် လမ်းကြောင်းတခုဖြစ်သည်ဟု (PAD) ညှိနှိုင်းရေးမှူး ဆူရီယာဆိုင် ခက်တဆီလာက ဆိုသည်။ ခက်တဆီလာသည် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ထမ်းများအား တရားမျှတစွာ လုပ်ကိုင်ရန် တောင်း ဆိုပြီး အစိုးရ၏ သုံးစွဲမှုသည်လည်း ပွင့်လင်းမှုမရှိဟု အခိုင်အမာဆိုသည်။
ဒု-၀န်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်သည့် ဆူရာပေါင် ဆူးဘဝေါင်လီ နုတ်ထွက် ရန် ဖိအားပေးသည့်အနေနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးရုံးရှေ့တွင် အနည်းဆုံး (၃) ရက်ကြာ ဆန္ဒပြသွား မည်ဟု ခက်တဆီလာက ပြောသည်။ ထို့ပြင် အစိုးရအေဂျင်စီများသို့ပေးသည့် ရေနှင့်မီးကိုလည်း ဖြတ်တောက်သွားမည်ဟု ထပ်လောင်းပြောသည်။ ။
ဆန္ဒပြမှုတွေကြောင့် ရာထူးမှ နုတ်ထွက် မည်မဟုတ်ဘဲ တိုင်းပြည် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုရဘို့ နည်းလမ်းမျိုးစုံ သုံးမည်ဟု ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် စမတ် ပြောသည်။ ဆန္ဒပြသူတွေ နေအိမ် ပြန်ဘို့ပါ မေတ္တာရပ်ခံထားသည်။
အာဏာမသိမ်းဟု ထိုင်းစစ်တပ် အာမခံ
ဘန်ကောက်မြို့တွင်းရှိ အရေးကြီးသော လမ်းမ များပေါ်တွင် အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး (PAD) အုပ်စု ဆန္ဒပြနေသော်လည်း စစ်တပ်အနေနှင့် အာဏာသိမ်းမည်မဟုတ်ကြောင်းစစ်တပ်အကြီး အကဲ အနုဖောင်က အခိုင်အမာ ပြောဆိုသည်။
ထိုင်းအစိုးရ ဖြုတ်ချဘို့ ဘန်ကောက်မှာ သောင်းနှင့်ချီ ဆန္ဒပြ
အစိုးရပိုင် NBT ရုပ်မြင်သံကြားဌာနကို ဆန္ဒပြသူတွေ သိမ်း
ယနေ့ဆန္ဒပြပွဲကို နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဟု ပီအေဒီဆန္ဒပြအဖွဲ့က ကြွေးကြော်
Bangkok Post/Agencies/ ၂၆ သြဂုတ် ၂၀၀၈
၀န်ကြီးချုပ်တပ်ဆင် ဆန့်ကျင်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ (PAD) သည် ထိုင်းနိုင်ငံ အမျိုးသား ရုပ်သံ
ထုတ် လွှင့်ရေးလုပ်ငန်း (NBT) ဌာနတွင်းသို့ ယနေ့ ၀င်ရောက်ပြီး ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုကို အဓမ္မ
စမတ်အစိုးရနှုတ်ထွက်ရေး တွန်းအားပေးမည့် ၎င်းတို့အစီအစဉ်အရ ယနေ့မနက်စောစောပိုင်းတွင်
(PAD) အဖွဲ့သည် ရုပ်သံလွှင့်ရုံဌာန နောက်ဖေးပေါက်မှ ၀င်ရောက်ကာ ၀န်ထမ်းများအားလုံးကို
အသံလွှင့်ရုံမှ အတင်းအကျပ်ထွက်ခွာစေခဲ့သည်။ ရုပ်သံလွှင့်မှု ဖြတ်တောက်ခြင်းမခံရမီ အချိန်ပိုင်း
လေးတွင် ဆန္ဒပြသူများ၏ ရုပ်ပုံများကို တခဏမျှ လွှင့်ထုတ်နေခဲ့သည်။
နောက်ပိုင်းတွင် ရဲများသည် ဆန္ဒပြသူတွေထဲမှ ပစ္စတိုနှစ်လက်၊ ဓားများနှင့် ဂေါ့ဖ်ရိုက်တံများ ကိုင်
ဆောင်ထားသည့် ဆန္ဒပြသူ (၈၀) ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည် အခြား (PAD) ဆန္ဒပြသူများသည် သယ်
ယူပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်သမ၀ါယမ၀န်ကြီးဌာန ၀င်းများအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်
ခဲ့သော်လည်း မည်သည့်အဆောက်အဦအတွင်းမှ ၀င်ရောက်ခြင်းမရှိပေ။
အစိုးရရုံးစိုက်ရာဌာနများသွားသည့်လမ်းကိုလည်း ပိတ်ဆို့ခံထားရပြီး အစိုးရ၀န်ကြီးအဖွဲ့အပတ်စဉ်
အစည်းအဝေးကို ပယ်ဖျက်ရန်အကျပ်ကိုင်ထားသည်။ ၀န်ကြီးချုပ်စမတ်သည် ကာကွယ်ရေးဦးစီး
ချုပ် ဘွန်ဆန်း နီယမ်ဖရာတစ်နှင့် လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များ၏ အကြီးအကဲများကို ခေါ်ယူကာ အရေးပေါ်ဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတရပ် ပြုလုပ်နေသည်ဟု ပြည်တွင်း မီဒီယာက ရေးသည်။
(PAD) အဖွဲ့၏ အဓိက အဖွဲ့ဝင် ဆွမ်ဆက် ကိုဆိုင်ခူလ် ဦးဆောင်သည့် ဆန္ဒပြသူ (၂၀၀၀) ခန့် သည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် သမ၀ါယမ၀န်ကြီးဌာနများ ရှေ့မှောက်
တွင် ယနေ့ ဆန္ဒပြနေကြသည်။ လက်ရှိအခြေအနေတွင် အရေးပေါ် အခြေအနေတရပ်အဖြစ် ကြေညာရန်မလိုဟု ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဘွန်ဆန်း နီယမ်ဖရာတစ်က ပြောသည်။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် စမတ် ဆန်ဒါရ၀ပ်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ပြုတ်ကျသွားမည်ဆိုသည့် ယုံကြည်မှုနှင့်အတူ
ယနေ့ ဆန္ဒပြပွဲတွင် (PAD) သည် ၎င်း၏ အနာဂတ်ကို လောင်းကြေးထပ်နေသည်။
ယနေ့သူနိုင်ကိုယ်နိုင်ဆန္ဒပြပွဲသည် “နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲ”ဟု (PDA) ထဲမှ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတဦးဖြစ်
သည့် ဆွန်ဒီလင်ထောင်ခူလ်က “ဒီတကြိမ်မှာ ကျနော်တို့ရှုံးနိမ့်မယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ နောက်ဆုတ်
ပြီး နိုင်ငံကို သူတို့လက်ထဲ ပေးအပ်လိုက်မယ်။ လူတွေက ကျနော်တို့ကိုမှ ဂရုမစိုက်တဲ့နောက်
ကျနော်တို့ကလည်း ပြည်သူတွေကို ဂရုစိုက်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ တိုင်းပြည်ကို သူများတွေပဲ
ယူပစေတော့ပေါ့” ဟု ပြောသည်။
သို့ရာတွင် မေလ (၂၅) ရက်နေ့ကတည်းကဆန္ဒပြနေခဲ့သော ထိုအဖွဲ့သည် ပါလီမန်ပြင်ပမှ ၀န်ကြီး
ချုပ်ရာထူးကို ဆင်းခိုင်းသည့်လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကို ငြင်းဆန်နေသော ၀န်ကြီးချုပ်စမတ်၏ ဖီဆန် မှုကို ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
အစိုးရသည် တရားဝင်အာဏာရအစိုးရဖြစ်သောကြောင့် အစိုးရကို ဖယ်ရှားရေးသည်လည်း ပါလီမန် မှတဆင့် ဖယ်ရှားခြင်းသာ ဖြစ်သင့်သည်ဟု မစ္စတာ စမတ်က ပြောသည်။
“၀န်ကြီးချုပ် တယောက်အနေနဲ့ တိုင်းပြည်တွင်း ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးအတွက် ကျနော့်မှာ တာဝန်ရှိ
တယ်။ ဆန္ဒပြတာတွေဟာလည်း တရားဝင်စည်းဘောင်ထဲကနေပဲ လုပ်သင့်ပါတယ်။ တရားလွန်ုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ရဲတွေက အရေးယူမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု စမတ်က ပြောသည်။
မစ္စတာဆွန်ဒီက (PDA) ကိုထောက်ခံအားပေးသူ (၃) သိန်းခန့် ယနေ့ဆန္ဒပြမည်ဟုမျှော်လင့်ထား
သော်လည်း ရဲဖက်ကမူ ဆန္ဒပြမှုသည် အင်အားသောင်းချီသည် အထိသာရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထား သည်။
အစိုးရ ယန္တယားကို ဖြတ်တောက်ခြင်း
(PAD) ၏ဗျူဟာမှာ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တိုင်းပြည်ကို တုံ့ဆိုင်းရပ်တန့်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုဗျူဟာထဲ
တွင် အစိုးရရုံးနှင့် ရချဒမ်နိုအင်လမ်းမတလျှောက်ရှိ ၀န်ကြီးဌာနအားလုံးကို စီးခြင်း၊ ဖူးခက်နှင့်
ဟက်ရိုင်တွင်ရှိ လေယာဉ်ကွင်း (၂) ခုကို အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ လမ်းများပိတ်ဆို့ခြင်း
တို့ ပါဝင်သည်ဟု မစ္စတာ ဆွန်ဒီက ဆိုသည်။
“ဒီနေ့ ဆန္ဒပြတာဟာ ထူးခြားတဲ့ပွဲပါပဲ။ အစိုးရ ယန္တရားတွေ အကုန်ရပ်တန့်မယ့် အရာမှန်သမျှ
ကျနော် တို့လုပ်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်သူတွေ ဒုက္ခဖြစ်စေမယ့်အလုပ်မျိုး လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး” ဟု ဆွန်ဒီက ပြောသည်။
ယခု အစိုးရရုံး လုံခြုံရေးအတွက် အရင်ထာရတ် ကွန်မင်ဒို (၁၀၀) ခန့် ပါဝင်သော တပ်ဖွဲ့တဖွဲ့
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်စမတ်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ ရုံးမတက်နိုင်စေရေးအတွက် ဘန်ကောက်ရှိ အစိုးရရုံးသို့
သွားသည့် အဝေးပြေးလမ်းမများ၊ လမ်းများတွင် ပိတ်ဆို့ရန် ယမန်နေ့က ဆန္ဒပြသူ သောင်းချီ၍
ဘန်ကောက်တွင် (PDA) ဆန္ဒပြသူများက အစိုးရရုံးသို့ဝင်စီးရန် စီစဉ်နေချိန်၌ (PDA) ကိုထောက်
ခံသောသူများက ဘန်ကောက်သို့လာသည့် အဓိကလမ်းမကြီးများကို ပိတ်ဆို့ထားမည်ဟုအဓိဋ္ဌာန်
ဆန္ဒပြ ပီအေဒီအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ
ဒီမိုကရေစီရေး ပြည်သူ့မဟာမိတ် (သို့) အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ PAD သည် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် တပ်ဆင်ကို ဆန့်ကျင်သော ဆန္ဒပြသူများစုစည်းထားသည့် မဟာမိတ်အဖွဲ့ တခုဖြစ်သည်။ ထိုမဟာမိတ်အဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းများတွင် မီဒီယာလောကထိပ်သီး ဆွန်ဒီ လင်ထောင်ခူ၊ နိုင်ငံရေးသမား ချမ်လောင် ဆရီမောင်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ် ဆက်ပရန် ခလေယန်နန်မိတို့ ပါဝင်သည်။ (၂၀၀၅) မှ (၂၀၀၆) အတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံ နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်း ကာလတွင် ထိုမဟာမိတ်အဖွဲ့သည် အဓိက လှုပ်ရှားသူများထဲတွင် အပါအ၀င်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘန်ကောက်နေ လူလတ်တန်းစား အများစုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ထိုမဟာမိတ်အဖွဲ့သည် ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရေးပါတီ အဖြစ် MASS PARTY ကိုလည်း ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း တပ်ဆင်ကို စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ထိုပါတီကို ပီအေဒီက ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ ။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဆန္ဒပြသူများက အစိုးရဌာနများကို ဝင်ရောက်မှုပြု၊ ဝန်ကြီးချုပ် သတိပေး
အင်္ဂါနေ့၊ သြဂုတ်လ 26 2008 15:21 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အစိုးဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြသူများက အင်္ဂါနေ့တွင် အစိုးရ အိမ်တော်ဝင်းသို့ အတင်းဝင်ရောက်မှု ပြုလိုက်ပြီး အစိုးရ ရုပ်မြင်သံကြား ဌာနတခုကို စီးနင်းထားသည်။
ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဒီမိုကရေစီအတွက် ပြည်သူ့မဟာမိတ် People's Alliance for Democracy အဖွဲ့ဝင်များ က အစိုးရ အိမ်တော်ဝင်းအတွင်း ၀င်ရောက်သွားခြင်းကို ရဲများ လက်ပိုက်ကြည့်နေခဲ့ကြရသည်။ ဆန္ဒပြသူတချို့က ခြံစည်းရိုး ကျော်ဝင်ရောက်ချိန်တွင် အချို့က ပိတ်နှောင်ထားသော သံချိန်းကြိုးများကို ဖြတ်တောက်ကာ ၀င်ရောက်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ဆန္ဒပြသူများသည် အန်ဘီတီ ရုပ်မြင်သံကြားချန်နယ် အသံလွှင့်ဌာန ၂ ခုလုံးကို လုံးဝ စီးနင်းထားပြီး ပညာရေး၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ရုံးများအတွင်း နေ့လည် ၂ နာရီတွင် ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဆမတ် ဆွန်ထော်ရဝေ့ခ်ျ က သူ့အစိုးရအနေဖြင့် သည်းခံနိုင်မှု အဆုံးစွန်သွားပြီဖြစ်ပြီး ဥပဒေချိုးဖောက်သော ဆန္ဒပြသူများကို ထိရောက်ပြင်းထန်စွာ အရေးယူမှု ပြုလုပ်သွားမည်ဟု သတိပေးကာ ဆန္ဒပြသူများ လူစုခွဲရန် သတိပေးလိုက်သည်။
အစိုးရ အိမ်တော်ဝင်း အတွင်းသို့ ဆန္ဒပြသူများ ပထမဆုံးအကြိမ် ၀င်ရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
၀န်ကြီးချုပ်ဆမတ်က ဆန္ဒပြ ခေါင်းဆောင်များ အနေဖြင့် ဆက်လက် ရှေ့တိုး လုပ်ဆောင်မည်ဆိုလျှင် သူ၏ အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းရန် အစိုးရလုပ်ပိုင်ခွင့် နည်းလမ်းအများကြီး ရှိသည်ဟု သတိပေးလိုက်သည်။
ဆန္ဒပြမှုများ ရပ်ဆိုင်းရန် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် တောင်းဆို
ထိုင်းအစိုးရအိမ်တော် အပြင်ဘက်တွင် တွေ့ရသော ဆန္ဒပြသူများ။
သြဂုတ် ၂၆၊ ၂၀၀၈။
ဟာ နောက်ထပ် စစ်အာဏာသိမ်းမှုတခု
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဆမတ်က် ဆွန်ထာရာဝေ
(Samak Sundaravej) က ပြောလိုက်ပါ
ဖြစ်ချင်နေကြပြီး စစ်တပ်က ၀င်စွက်ပြီး
တော့ နောက်ထပ် အာဏာသိမ်းစေချင်ကြတယ်လို့ မစ္စတာဆမတ်က်က သတင်း
ဒီကနေ့အစောပိုင်းမှာ ထောင်သောင်းချီတဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေက အစိုးရအိမ်တော်ကို
၀န်းရံထားတဲ့ ၀င်းထဲကို ချိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံပိုင် ရုပ်မြင်
သံကြားဌာနချုပ်ထဲကိုလည်း ဆန္ဒပြသူတွေ ၀င်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အစိုးရရုံးတွေကို ၀န်းရံကြတဲ့ ဆန္ဒပြသူအရေအတွက် ၃၀,၀၀၀ လောက်ရှိမယ်လို့
ရဲတပ်ဖွဲ့က ခန့်မှန်းပေမယ့် ဆန္ဒပြပွဲကို လှုံ့ဆော်စည်းရုံးသူတွေကတော့ လူ ၃၀၀,၀၀၀
လောက်ထိပါဝင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းကြောင်း ပြောပါတယ်။
ရုပ်မြင်သံကြားကနေ နိုင်ငံကို မိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာ ဆန္ဒပြပွဲတွေကို ရပ်ဆိုင်းဖို့
မရုပ်သိမ်းဘူးဆိုရင်တော့ ရဲတပ်ဖွဲ့က အရေးယူတာကို ဆန္ဒပြသူတွေ ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မပါရန် ပြောဆို
ကိုစိုး | သြဂုတ် ၂၆၊ ၂၀၀၈
ထိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် မစ္စတာ စမတ်ခ် ဆွန်ထော်ရဝဲ့ က အနောက်နိုင်ငံများက မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ကို နိုင်ငံရေးအရ အသုံးချခံ ကိရိယာတခုကဲ့သို့ ပြုလုပ်နေကြောင်း ယမန်နေ့က ဝေဖန် ပြောကြားသည်။
ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ခွင့်မရဘဲ စနေနေ့က ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားသည့် ကမ္ဘာ့ ကုလ သမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ အီဗရာဟင် ဂန်ဘာရီနှင့် တွေ့ဆုံ စဉ် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး အတွက် မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းရာတွင် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်မပါရှိပါက ပိုမို အလုပ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း မစ္စတာ စမတ်ခ် ဆွန်ထော်ရဝဲ့ က သံတမန်များကို ပြောကြားခဲ့ သည်ဟု အေအက်ဖ်ပီ သတင်းက ဖော်ပြသည်။
မစ္စတာ စမတ်ခ်က ဆက်လက်ပြီး “ဥရောပ က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကိရိယာ တခုလို သုံးနေပါတယ်၊ တကယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဆက်ဆံရေး မရှိဘူးဆိုရင် မြန်မာအစိုးရနဲ့ အပြည့်အ၀ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း နိုင်မှာပါ”ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် သတင်းထောက်များကို ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအနေနှင့် အာဆီယံ ဥက္ကဌ ဖြစ်လာပါက စစ်အစိုးရပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် လေ့လာသူများကို ခွင့်ပြုရန် ကြိုးပမ်းမည်ဟုလည်း မစ္စတာ စမတ်ခ် က ပြောသည်။
ယင်းသို့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်၏ပြောဆိုဝေဖန်မှုများကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) က ပြန်လည် ငြင်းဆိုလိုက်သည်။
“တိုင်းပြည် ခေါင်းဆောင် တဦးအနေနဲ့ တခြားသော တိုင်းပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုလို ဝေဖန်ပြောဆို မှုမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး”ဟု အန်အယ်လ်ဒီ ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
ဦးဥာဏ်ဝင်းက မစ္စတာ စမတ်ခ်သည် မြန်မာပြည်သူများကို လျစ်လျူရှုပြီး စစ်အစိုးရ ဘက်သို့ အကြိုက်လိုက်၍ ပြောကြား ခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်နေ့စဉ်သတင်းစာ The Nation သတင်းစာ အယ်ဒီတာ က၀ီ ချောင်ခစ်တာဗွန် ကလည်း မစ္စတာ စမတ်ခ်၏ ဝေဖန်ပြောဆိုချက်သည် အဓိပ္ပာယ် ကင်းမဲ့သည့်ပြောဆိုချက် ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
“သူ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံက ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေအပျက်တွေကို နားလည်ပုံမရဘူး၊ သူသဘောမကျတဲ့သူ၊ သူနဲ့ သဘော မတူညီတဲ့သူ ဘယ်သူ့ကို မဆို ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပြောဆိုတဲ့ အကျင့်ရှိတယ်၊ ကျနော်တို့ ထိုင်း မီဒီယာ တွေကိုလည်း နေ့စဉ်ကြည့်ပြီး ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တယ်”ဟု ၎င်းက ပြောဆိုသည်။
ရန်ကုန်အခြေစိုက် ဇိုမီးအမျိုးသား ကွန်ဂရက် ဥက္ကဌ ဦးကျင့်ရှင်းထန်ကလည်း မစ္စတာ စမတ်ခ်၏ ပြောကြားချက်သည် မြန်မာပြည်သူများကို စော်ကားမော်ကား ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။
“မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ထွန်းမှုအတွက် အထောက်အကူမဖြစ်တဲ့ ပြောဆိုမှုပါပဲ”ဟုလည်း ၎င်း က ဆိုသည်။
မစ္စတာ စမတ်ခ်သည် မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးထက် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ်ကို ကြည့်ရှု ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သံအမတ်ကြီးဟောင်းနှင့် ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီး သခင်ချန်ထွန်းကလည်း ဝေဖန်ပြော ဆိုသည်။
မစ္စတာ ဂန်ဘာရီက ဘန်ကောက်တွင် တွေ့ဆုံချိန်အတွင်း မစ္စတာ စမတ်ခ်အား ရှေ့မတိုးနောက်မဆုတ်သာ ဖြစ်နေသော မြန်မာပြည် နိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂကို ကူညီထောက်ပံ့ရန် တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ယင်းသို့ မစ္စတာ စမတ်ခ်က ဝေဖန်ပြောဆိုနေသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ခွင့်မရခဲ့သည့် မစ္စတာ ဂန်ဘာရီ ၏ ခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂက ယင်းခရီးစဉ်သည် အလဟဿ ခရီးစဉ် တခုမဖြစ် ကြောင်း ယမန်နေ့က ပြောသည်။
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ တဦးဖြစ်သည့် မစ္စ မေရီ အိုခဘဲက “မစ္စတာ ဂန်ဘာရီရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်ဟာ ပုဂ္ဂလိက အလည်အပတ် ခရီးစဉ်တခုမဟုတ်ပါဘူး၊ ကုလ သမဂ္ဂရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် တခုဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောကြားသည်။
မစ္စတာ ဂန်ဘာရီသည် နယူးရောက်သို့ မပြန်မီ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ရန် အစီအစဉ် ရှိကြောင်း မေရီအိုခဘဲ က ပြောသည်။
မညီညွတ်မှုကြောင့် ပေးဆပ်ရသည့် အဖိုးအခများ
ကျော်စွာမိုး | သြဂုတ် ၂၆၊ ၂၀၀၈
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုများ၏ ဦးတည်ရည်မှန်းချက်များ မဆုံးရှုံးလိုပါက ယခုအချိန်တွင် မိမိကိုယ်မိမိ ပြန်လည်ဝေဖန် သုံးသပ်မှုများ မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်နေပေပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုက နှစ် ၂၀ တိုင်ခဲ့လေပြီ။ လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ် ၂ ခု ကာလအတွင်း မည်သည့်အောင်မြင် မှုများရခဲ့သနည်း။ လှုပ်ရှားမှု၏ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဆီသို့ ပို၍ နီးကပ် လာခြင်း ရှိ မရှိ ဆိုသည့် မေးခွန်းများ ထုတ်ရပါ တော့မည်။
ထိုမေးခွန်းများကို အဖြေထုတ်ရန် ၈ လေးလုံး လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ခဲ့သော ကျောင်းသားဟောင်း ၅ ဦး၏ ကံကြမ္မာကို လေ့လာကြည့်ရှုသင့်သည်။ သွေးစွန်းသော ထိုနေ့ရက်များတွင် သူတို့တတွေ အတူတကွ မျှော်လင့်ချက်များဖြင့် မမောမပန်း ချီတက်ခဲ့ကြဖူးသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် အသက် ၂၀ အရွယ်သာရှိသေးသော ကိုထွန်းမြင့်အောင်က ယခုအခါ ရန်ကုန်မြို့တနေရာတွင် ပုန်းအောင်း နေရ၏။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှစ၍ အကျဉ်းထောင် ၅ ခုသို့ ၀င်ချည်၊ ထွက်ချည်ဖြင့် ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရင်း အကျဉ်းသား ဘ၀ကို လုံလုံလောက်လောက် ခံစားတွေ့ကြုံခဲ့ဖူးပြီးဖြစ်သည့် ကိုထွန်းမြင့်အောင်မှာ အသက် ၄၀ အရွယ်ယခုတိုင် ၀ရမ်းပြေး ဘ၀ဖြင့် စစ်အစိုးရ၏ အဖမ်းအဆီး မှ လွတ်ရန် တိမ်းရှောင်နေရသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် လူထုအုံကြွမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီးနောက် ထောင်ဒဏ် ၁၆ နှစ် ကျခံခဲ့ရသော ကိုတင်အေးကတော့ ယခုအချိန်တွင် ပြည်ပသို့ထွက်ပြေး လာခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မဲဆောက်မြို့တွင် နေထိုင်လျှက်ရှိသည်။ သူက ပြည် ပြေးဘ၀ဖြင့် လောလောဆယ် လွတ်လပ်မှုကို ခံစားနေရချိန်တွင် သူ့ချစ်သူ မနိုဘယ်အေးက မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရက်စက်ဆုံးဟု နာမည်ကြီးသည့် အင်းစိန် ထောင် အကျဉ်းခန်းတခုထဲ၌ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ထောင်ဒဏ် ကျခံနေရသည်။
လက်ရှိ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့တွင် နေထိုင်လျှက် ရှိသော ကိုအောင်နိုင်ဦးနှင့် ကိုညိုအုန်းမြင့်တို့ နှစ်ဦးကမူ ရက်စက်ကြမ်း ကြုတ်သော စစ်အစိုးရ လက်အောက်တွင် ပြေးလွှားရုန်းကန်နေရသည်ထက် ပြည်ပတွင် နေထိုင်ခြင်းက ပို၍ကောင်းသည် ဟု ယူဆကာ ဤလမ်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။
ကိုညိုအုန်းမြင့် ကူညီ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည့် ရန်ကုန်ရှိ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လူငယ်ဌာနခွဲ) ကမူ အန္တရာယ်များစွာ ကြားတွင် ဆက်လက် လှုပ်ရှားနေကြဆဲဖြစ်သည်။
ကိုအောင်နိုင်ဦးကတော့ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် နယ်စပ်၌ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ABSDF - မြန်မာနိုင်ငံ၏ တခုတည်းသော ကျောင်းသား တပ်မတော်) ၏ နိုင်ငံခြားရေး အတွင်းရေးမှူး အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ဖူးသည်။
ဖော်ပြခဲ့သည့် ၅ ဦးက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖိနှိပ်မှုများကြားမှ ရုန်းကန် လှုပ်ရှားနေကြသည့် ထောင်ပေါင်း များစွာသော ပြည်သူများနှင့် ပြည်ပ နိုင်ငံများတွင် အခက်အခဲများဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား များကို ကိုယ်စားပြုနေသည့်ပြင် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားမှု၏ ပုံရိပ် ကဲ့သို့လည်း ဖြစ်နေသည်။ ထို့အပြင် ၄၆ နှစ်ကြာ အာဏာရှင် စစ်တပ် ကြီးစိုးရေး ၀ါဒအောက်မှ တိုင်းပြည်တခု၏ နိုင်ငံရေးအခြေအနေ ကိုလည်း ဖော်ပြပေါ်လွင် နေစေသည်။
ထို ၅ ဦးသည် မတူညီသော လမ်းကြောင်း များပေါ်တွင် ရွေးချယ် လျှောက်လှမ်း နေခဲ့ကြသော်လည်း ၎င်းတို့၏ ဘုံရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင် ကတော့ အတူတူပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အဖိနှိပ်ခံနေရသော သူတို့၏ တိုင်းပြည်အတွက် ဒီမိုကရေစီ စနစ် တည်ဆောက်ရန် ရည်သန်ထားကြပြီးလည်း ဖြစ်သည်။
နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကြာ၍ ပြန်ကြည့်သောအခါတွင် ထိုရည်မှန်းချက်က ပိုမို မှုန်ဝါးလာသလို ရှိနေသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ထိုသို့မှုန်ဝါးခဲ့ရသည်ကို ပြန်လှန်စစ်ကြောရန် လိုအပ်ပြီဖြစ်၏။
မြန်မာ စစ်အစိုးရက တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသည့် ကိစ္စအပေါ် မည်သူမျှ အငြင်းမပွား။ လူထုအပေါ် မတရား ရက်စက်စွာ ဖိနှိပ်နေသော ကိစ္စကလည်း မေးခွန်းထုတ်စရာ မလိုတော့ပါ။ အလားတူ ပြစ်ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀န်း၏ ဖိအားပေးမှုများက ထိရောက်မှု မရှိကြောင်းလည်း အထင်းသား ပေါ်လွင်နေပြီ ဖြစ်သည်။
အနှစ် ၂၀ ဆိုသော အချိန်ကာလတခုသည် ရက်စက်သော စစ်အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက် နှစ်ပေါင်းများစွာ ခံစားကျ ရောက်နေရသည့် တိုင်းပြည်တခု အနေနှင့် အခြေခံ အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် မလုံလောက်သေးသည့် အချိန် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးအတွက် ဘ၀များကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားကြရသည့် အတိုက်အခံများ အတွက်မူ တဘ၀စာ ဖြစ်သွား နိုင်ပါသည်။ ယခုအချိန်က လေးလေးနက်နက် ပြန်လည် ဆန်းစစ် မေးခွန်းထုတ်ရမည့် အချိန် ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ အင်အားသစ်တခု ပေါ်ထွန်းလာမည်ဟု လူအများက ယုံကြည် နေကြသည်။
“ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးသမားတွေက မပါးနပ်ကြဘူး။ သူတို့တွေက သာမာန် ရိုးရိုး နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူ အဆင့်လောက်ပဲ ရှိတယ်။ ဒီထက်ပိုမရင့်ကျက်သေးဘူးလို့ ကျနော်ထင်တယ်။ သူတို့တွေက အာဏာကို ဘယ်လို ယူရမယ်ဆိုတာ မသိဘူး။ သူတို့မှာ မဟာဗျူဟာကျတဲ့ မူဝါဒတွေလည်း မရှိဘူး” ဟု တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူ တဦးဘ၀မှ နိုင်ငံရေး အကဲ ဖြတ်တဦး ဖြစ်လာခဲ့သူ ကိုအောင်နိုင်ဦးက ပြောသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် လူထုအုံကြွမှုတွင် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အများစုမှာ လူထုနောက်သို့ လိုက်နေခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပြီး လူထုကို ဦးဆောင်ခဲ့သူများ မဟုတ်ကြဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
သို့သော်လည်း မကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်းတော့ မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ကျောင်းသားများက လူထုအုံကြွမှုကို စတင် လိုက်သည်နှင့် မကြာမီ မှာပင် လွတ်လပ်ရေးဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် အပါအ၀င် သြဇာတိက္ကမကြီးသော ခေါင်းဆောင်များ၊ နိုင်ငံရေးသမားများက လှုပ်ရှားမှုအတွင်း ပါဝင်ပူးပေါင်းကာ လူပ်ရှားမှုကြီးကို ဦးဆောင်နိုင်ရန် အားထုတ်ခဲ့ကြသည်။
တိုင်းပြည်တပြည်လုံးတွင် အာဏာရှင်စနစ်အုပ်ချုပ်ရေး အဆုံးသတ်၍ ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲများ ပေါ်ပေါက်ရေး အတွက် မျှော်လင့်ချက်များ၊ စိတ်အားထက်သန်မှုများဖြင့် ပြည့်နှက်နေခဲ့သည်။
“ဒေါ်စု၊ ဦးအောင်ကြီး၊ ဦးနု အဲဒီလို သြဇာကြီးတဲ့ ခေါင်းဆောင် တွေမျိုး တိုင်းပြည်သမိုင်းမှာ ဘယ်တုန်းကမှ မရခဲ့ဖူးဘူး၊ ဒါပေမယ့် ၀မ်းနည်းဖို့ ကောင်းတာက အဲဒီခေါင်းဆောင် တွေက အခွင့်အရေးကို အမိအရ မဆုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ကြဘူး” ဟု ကိုအောင်နိုင်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။
ထိုခေါင်းဆောင် ၃ ဦးမှာ ညီညွတ်ရေးကို ပစ်ပယ်၍ ၎င်းတို့ လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်သာ လျှောက်ခဲ့ကြသည် ဟု သူကဆက်ပြောသည်။
“တကယ်လို့များ သူတို့သာ ညီညွတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဇာတ်လမ်းက တမျိုးတဖုံ ဖြစ်လာမှာ” ဟု ၎င်းက ဆို၏။
ဆက်လက်၍ ကိုအောင်နိုင်ဦးက စစ်တပ်အနေနှင့် တိုင်းပြည်ကို မထိန်းချုပ်နိုင်တော့သည့်အချိန်တွင် ထိုခေါင်းဆောင်များက ညီညွတ်စွာဖြင့် ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် အရပ်သားအစိုးရ တရပ် အောက်မှ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရန် ကမ်းလှမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သင့်သည်ဟု ပြောသည်။
ထိုအချိန်က ဒေါက်တာမောင်မောင် ဦးဆောင်သည့် အရပ်သား အစိုးရတရပ် ရှိနေခဲ့ချိန် ဖြစ်သည်။ ဦးနေ၀င်းနှင့် သူ၏ အရိုက်အရာဆက်ခံသူ “သားသတ်သမား”ဟု နာမည်ကြီးသည့် ဦးစိန်လွင်တို့ ပြုတ်ကျခဲ့ရပြီးနောက် ဒေါက်တာမောင်မောင် က သမ္မတအဖြစ် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရသည်။
၁၉၈၈ လှုပ်ရှားမှု၏ အဆိုးဝါးဆုံးသော အမှားများအနက် တခုမှာ ညီညွတ်ရေး ကင်းမဲ့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်၏။ ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းက ချဉ်းကပ်မေးမြန်းခဲ့သော လှုပ်ရှား တက်ကြွသူ အများစုနှင့် နိုင်ငံရေးသမား အများစုက ထိုအချက်ကို ၀န်ခံခဲ့ကြသည်။
ညီညွတ်ရေးဆိုသည်မှာ အာဏာရှင်အစိုးရတိုင်း ယခင်ကတည်းက တုန်လှုပ်ခဲ့ပြီး ယခုတိုင် ၎င်းတို့၏ နှလုံးသားအတွင်း ကိန်းအောင်းနေသော စိမ့်၍ ကြောက်ရွံ့နေသည့် ကိစ္စ ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများက အားထားနိုင်သည့် အထိရောက်ဆုံး လက်နက်တခုလည်း ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အတိုက်အခံများက ယခုတိုင် ညီညွတ်ရေးကို မဆုပ်ကိုင် နိုင်ကြသေးပေ။ ညီညွတ်ခြင်းကင်းမဲ့နေခြင်း ကြောင့်လည်း အာဏာရှင် စစ်အစိုးရအတွက် သက်ဆိုးရှည်ခွင့် ရနေစေ ခြင်းဖြစ်သည်။
သာဓကအားဖြင့် သြဇာတိက္ကမကြီးမားသော ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဗိုလ်မှုးချုပ်ဟောင်း ဦးအောင်ကြီး နှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးတင်ဦး တို့ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော အဓိကအတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး ပါတီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) သည်ပင်လျင် ညီညွတ်ရေးကို အောင်မြင်စွာ မတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပေ။ ဦးအောင်ကြီးက ပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှ ခွဲထွက်ကာ နောက်ပိုင်းတွင် သူ့ ကိုယ်ပိုင်ပါတီကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။
အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေး အင်အားစုများအကြား မညီညွတ်ခဲ့သည်မှာ ယခုမှမဟုတ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် မတိုင်ခင် နှစ် ကာလများစွာ ကတည်းကပင် မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု လူထုအုံကြွမှု ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (ဗကသ) ၏ ခေါင်းဆောင် တဦးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သူ ကိုတင်အေးက မှတ်ချက်ချသည်။
“၂၀ ရာစုနှစ် အစောပိုင်းကာလ ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်မှုကို တွန်းလှန်တဲ့ ကာလမှာ ကတည်းက နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေကြားမှာ တကွဲတပြား ဖြစ်နေခဲ့တာ” ဟု သူကပြောသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော အစည်းအဝေးတခုတွင် ညီညွတ်ရေး မရနိုင်သောကြောင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စများ ပျက်ပြားခဲ့ရပုံကိုလည်း ကိုတင်အေးက ပြန်ပြောင်းပြောပြခဲ့သည်။
“ဒါက ဗြိတိသျှကိုလိုနီတွေ ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ သွေးခွဲ အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်ကြောင့် ဖြစ်နေတာလို့ ပြောကြ ပေမယ့် ကျနော်တို့သာ ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ ညီညွတ်နေမယ် ဆိုရင် ဘယ်သူကမှ သွေးခွဲလို့မရပါဘူး” ဟု သူကဆိုသည်။
အမှန်တရားနှင့် တရားမျှတမှုအတွက် မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ရုံ တခုတည်းဖြင့် မလုံလောက်ဟု သြဇာကြီးသော ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအုပ်စု၏ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ ကိုထွန်းမြင့်အောင်က ဆိုသည်။ သူကဲ့သို့သော ကျန် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားအုပ်စု ခေါင်းဆောင်အားလုံး ယခုအချိန်တွင် ထောင်ထဲရောက်နေကြပြီ ဖြစ်သည်။
“ကျနော်တို့တွေက အမှန်တရားနဲ့ တရားမျှတမှုကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆုပ်ကိုင် ထားတာတော့ မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေကို ဆုပ်ကိုင်ထားရုံ နဲ့တော့ အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးဗျ။ အဲဒီလို အမှန်တရားဘက်၊ ပြည်သူ့ဘက်မှာ မားမား မတ်မတ် ရပ်နေလို့ပဲ တနေ့ ဒီတိုက်ပွဲ အောင်မြင်ရမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ထားပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီနေ့က ဘယ်တော့လဲ။ ကျနော်တို့ မြေးမြစ်တွေ လက်ထက် ကျမှလား” ဟု ကိုထွန်းမြင့်အောင်က ဆက်ပြောသည်။
ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူများ အားလုံး ပိုမိုကြီးမားသည့် အနစ်နာခံ စွန့်လွှတ်မှုများ ပေးဆပ်ရန် အသင့်ရှိ နေကြသည်ဟု သူကဆိုသည်။
“ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားသင့်တာကတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှု တခုတည်းနဲ့ အောင်ပွဲ ရ၊ မရ ဆိုတာပါပဲ” ဟု သူက နှိုင်းနှိုင်းဆဆ ပြောသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်မှ စ၍ ထောင်ပေါင်းများစွာသော နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှား တက်ကြွသူ များကို စစ်အစိုးရက ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု များဖြင့် နာမည်ကြီးသည့် အကျဉ်းထောင်များတွင် ထောင်သွင်းအကျဉ်းချ ထားခဲ့ပြီး အနည်းဆုံး နိုင်ငံ ရေးအကျဉ်းသား ၁၃၇ ဦးက စစ်အစိုးရ၏ သံတိုင်များ နောက်ကွယ်တွင် အသက်ဆုံးရှုံး ခဲ့ရသည်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံရေး အကျဉ်း သားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာပြည်) (AAPP) က ထုတ် ပြန်သည့် ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရှိရပါသည်။
ထိုမျှမက ၁၉၈၈ ခုနှစ် လူထုအုံကြွမှုကြီးအား ပြင်းထန်စွာ ဖြိုခွင်းခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ထောင်သောင်းချီသော လှုပ်ရှား တက်ကြွသူများလည်း ပြည်ပသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရသည်။
တကိုယ်ရေ စွန့်လွှတ်မှုများအတွက် အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထားရုံမျှဖြင့် မလုံလောက်ဘဲ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် များ အနေဖြင့် လက်တွေ့ကျသော မဟာဗျူဟာ၊ ရှင်းလင်းသော ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ညီညွတ်ရေးအတွက် ပိုမို အာရုံစိုက်သင့်သည်ဟု ကိုထွန်းမြင့်အောင်က ပြောသည်။
၁၉၈၈ လူထုအုံကြွမှုနှင့် နောက်ပိုင်းနှစ်များအထိ၊ အထူးသဖြင့် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ အပြီး ကာလများတွင် နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် အားလုံးနီးပါး တရားသေ ဆုပ်ကိုင်ခဲ့သော မူဝါဒများအနက် တခုမှာ စစ်တပ်ကို သူတို့၏ နေရာမှန်၊ စစ်တန်း လျားသို့ ပြန်ပို့ရေးပင် ဖြစ်သည်။ ဤမူဝါဒကို ဆုပ်ကိုင် သူများထဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း တဦး အပါအ၀င် ဖြစ်သည်။ သူ၏ဖခင်က စစ်တပ်ကို တည်ထောင်ခဲ့သူ တဦး ဖြစ်ပြီး စစ်တပ်၏ အခန်းကဏ္ဍသည် လူထုကို နှိပ်စက်ရန်မဟုတ် ဟုလည်း သူက ပြန်ပြောင်းပြောခဲ့သည်။
ယခုအချိန်တွင် ပြည်ပရောက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက် နယ်မြေ) ၏ နိုင်ငံခြားရေး ကော်မတီ တာဝန်ခံ ဖြစ်သော ကိုညိုအုန်းမြင့်က ထိုနည်းလမ်းကို အစွန်းရောက်သည်ဟု မြင်ကြောင်း ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ရဲ့ မူဝါဒအားနည်းချက်တခုက မင်းတို့ ငါ့ဘက်ကလား ရန်သူ့ဘက်ကလား ဆိုပြီး စဉ်းစားကြတဲ့ အချက်ပဲ။ အလယ်အလတ် ရပ်တည်ချက်ပုံစံမျိုးဆိုတာ မရှိခဲ့ဘူး။ စစ်အစိုးရကို ပိုပြီး ခပ်ရိုင်းရိုင်း၊ ခပ်ထန်ထန်၊ ခပ်ကြမ်းကြမ်း စကားလုံးတွေနဲ့ မပြောနိုင်ရင် ခင်ဗျား နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်နေရာ ရမှာမဟုတ်ဘူး” ဟု ကိုညိုအုန်းမြင့်က သုံးသပ်သည်။
အကျိုးဆက်အဖြစ် ဘက်နှစ်ဘက်စလုံးက တဘက်နှင့်တဘက် အပေးအယူ လုပ်ခြင်းထက် အပြီးသတ် ချေမှုန်း ရေးကိုသာ ဦးတည်နေကြသည်ဟု သူက ပြောပြခဲ့သည်။
“အန်အယ်လ်ဒီက ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ဘဝင်မြင့်သွားတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်က ပါတီဝင် တွေကြားမှာ လက်တွေ့မကျတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ နိုင်ငံရေးအသာစီး ရပြီလို့ ထင်ခဲ့ကြတယ်။ တကယ်တော့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ပွဲသိမ်းလို့ ထင်မြင်ယူဆတာ မဟာအမှားပဲ” ဟု ကိုညိုအုန်းမြင့်က ပြောပြခဲ့သည်။
အန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင် အများစုလိုချင်သည်မှာ စစ်တပ်က ၎င်းတို့ပါတီထံသို့ နိုင်ငံရေးအာဏာ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရန် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ယင်းအချက်ကြောင့်ပင် စစ်တပ်ကို ပို၍ ဝေးကွာ သွားစေပြီး အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးလုပ်ရန် အတွက်လည်း ပို၍ အလှမ်းဝေး သွားစေသည်ဟု သူက ဆိုသည်။
“၁၉၈၈၊ ၉၀ ကာလတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံက စစ်မြေပြင်ကြီးလိုပဲ။ ဒေါ်စုက ကျနော်တို့ရဲ့ တပ်မှူးပေါ့။ ပြည်သူတွေကတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ရဲဘော်တွေ။ ကျနော်တို့က အင်အားကြီးတဲ့ တကယ့်စစ်တပ်ကြီးနဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာနဲ့ တူတယ်။ စစ်တပ်က ကျနော်တို့ တပ်တွေကို ဖြိုခွင်းလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့်အင်အား ကို ကိုယ် ကျနော်တို့ ပြန်မတည်ဆောက် နိုင်တော့ဘူး” ဟု ကိုညိုအုန်းမြင့်က ပြောသည်။
ထိုစဉ်က နိုင်ငံရေးသမားများနည်းတူ လှုပ်ရှား တက်ကြွသူများ၏ နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံမှာ ၃၊ ၄ လ ခန့်သာ ရှိသေး သော်လည်း အဖွဲ့ချုပ်တွင် မူဝါဒချမှတ်သူများ ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်ဟု သူက ပြောပြသည်။
“ကျနော်တို့ရဲ့ အမှားတခုကတော့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ မူဝါဒထဲမှာ ရောထည့် ခဲ့ကြတာပဲ။ နွားရိုင်းသတ်ပွဲလို မည်းမည်းမြင်ရာ လိုက်ဝှေ့နေသလို ဖြစ်နေတယ်” ဟု သူက ပြန်ပြောင်း သုံးသပ်သည်။
မြန်မာလူမျိုး အများစုကလည်း ဤသို့ ရပ်တည်ချက် ပြင်းထန်မှုမျိုးကို သဘောကျခဲ့ပြီး အပေးအယူ လုပ်ရန် မလိုလား ခဲ့ကြဟု ကိုညိုအုန်းမြင့်က ဆိုသည်။
“၁၉၈၈ ခုနှစ်က တကယ့်ကို ကြီးမားတဲ့ လူထုအုံကြွမှုကြီးကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးတဲ့ နောက်မှာ ကျနော်တို့ တွေက လုံးဝ ပြီးပြည့် စုံတဲ့ အောင်ပွဲတခု ရတော့မယ်လို့ ထင်ခဲ့ကြတာ” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ကိုအောင်နိုင်ဦးက အင်္ဂလိပ်ကဗျာဆရာ ၀ီလီယံ အားနက်စ် ဟန်နလီ ရေးသည့် အနိုင်မခံ (Invictus) ဆိုသော ကဗျာထဲမှ စာကြောင်းတကြောင်းကို ဗိုလ်ချုပ် အလွန်သဘောကျခဲ့သည်ဟု ပြောပြသည်။
“ငါ၏ ဦးခေါင်း သွေးများဖြင့် ရဲရဲနီလျှက်ရှိသည်။ သို့သော် ညွတ်ကား မညွတ်.. ဆိုတဲ့စာသားလေးပဲ။ ကျနော်တို့တွေလည်း အဲဒီသတ္တိမျိုးနဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် တခြားဘက်မှာတော့ ကျနော်တို့ အပြန်အလှန် ညှိနှိုင်းမှုတွေ လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်” ဟု ကိုအောင်နိုင်ဦးက ပြောပြသည်။
အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များက စစ်အစိုးရနှင့် အပေးအယူမလုပ်နိုင်ခြင်းမှာ အံအားသင့်ဖွယ် မဟုတ်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အတိုက်အခံများ အချင်းချင်း အကြားတွင်ပင် အပေးအယူ မလုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ကိုအောင်နိုင်ဦးက သုံးသပ်သည်။
“ရန်သူကို အထီးကျန်မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ရန်သူကို ချောင်ထဲမှာ ထိုးမထားပါနဲ့။ ကျနော်တို့က ရန်သူကို အလင်းထဲကို ဆွဲထုတ်ဖို့ လိုတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ အပြောင်းအလဲဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး” ဟု သူက ဆိုသည်။
သို့သော် စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်များကို အလင်းရောင်အတွင်းသို့ ထွက်လာ စေရန် မည်သို့ ဆွဲဆောင်ရမည်ကို မည်သူ တဦး တယောက်မျှ မသိခဲ့ကြပေ။ သေချာသည်ကတော့ စစ်အစိုးရတွင် ထို့ကဲ့သို့သော နိုင်ငံရေးဆန္ဒ မရှိသည် ကို သမိုင်းက သက်သေပြခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး အတွက် ခြွင်းချက်မထား၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် တောင်းဆိုနေ မည့်အစား စစ်အစိုးရ ထံသို့ ရှင်လင်းပြတ်သားသည့် အာဏာခွဲဝေယူရေး ကမ်းလှမ်းချက်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာကာ တင်ပြ သင့်သည်ဟု ကိုအောင်နိုင်ဦးက ယုံကြည်နေသည်။
“မြန်မာ့နိုင်ငံရေးက အစွန်း ၂ ဘက်ကို ရောက်နေကြတယ်။ ကျနော်တို့က အစွန်းရောက် အဖြေတွေ ရှာကြမှာလား။ စစ်အစိုးရကို ဗုံးကျဲပြီး အပြတ် ရှင်းပစ်နိုင်မှာလား။ ဒါက မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါဆို စစ်အစိုးရနဲ့ လုံးဝ ပူးပေါင်းမလား။ ဒါကလည်း မဖြစ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတခုပဲ” ဟု သူက ဆိုသည်။
အလယ်အလတ်ကျသော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး နည်းလမ်းသည်လည်း အလုပ်မဖြစ်ဟု သူကပြောပြန်သည်။
“ဒါဆိုရင် ကျနော်တို့က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်လည်ဝေဖန် ဆန်းစစ်မှု လုပ်ဖို့ လိုအပ်နေပြီ။ နိုင်ငံရေး ရလဒ်ကောင်းတွေ ထွက်ပေါ်နိုင်တဲ့ နည်းတွေကို စဉ်းစားဖို့လိုလာပြီ။ ၁ နှစ် ဒါမှမဟုတ် ၂ နှစ် လောက် မှား ခဲ့တာက ပြဿနာမဟုတ်ပေမယ့် အနှစ် ၂၀ တောင် မှားတယ် ဆိုတာတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး” ဟု ကိုအောင်နိုင် ဦးက မှတ်ချက်ချသည်။
ကျော်စွာမိုးရေးသားသည့် The Price of Disunity ကိုဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုဖော်ပြပါသည်။ [Top]
http://kaungkinko.myanmarbloggers.org/2007/10/blog-post_06.html မှ ကျမနှစ်သက် မိသော ကဗျာလေးအား ကူးယူဖော်ပြ ပါသည်။
BY မလေးမေ ... 8/24/20080အကြံပြုခြင်း